အကိုထကျကောငျးတဲ့သူ – My Blog
ကတြျောက ဆရာဝနျတဈယောကျပါ။ နံမညျကတော. အောငျမွတျပါ။ စဈတပျကနေ ပွောငျးလာတဲ. ဆရာဝနျကွီးပေါ.ဗြာ။ အသကျကတော. ၃၅ နှဈဗြ။ မိနျးမလား ရှိတာပေါ.၊ အသကျ ၂၅နှဈအရှယျ ဆရာဝနျမလေးပေါ.ဗြာ။ ကတြျောလား သူ.အရငျ အမြားကွီး ထားခဲ.ဖူးတာပေါ. မယူတာပဲရှိတယျ။ လူကောငျထှားထှား အရပျက ၅ပေ၁၁လကျမ၊ ပောငျခြိနျ ၁၆၀ ဆိုတော. လူကောငျကွီးကွီး ဟိုဒငျးလဲ ကွီးကွီးပေါ.ဗြာ။ စျောတှဆေို ဘယျတှေ.မရှောငျပဲ အပြိုကော အအိုကော လငျရှိတာကော တခုလပျကော ဘာမှ မရှောငျဘူး တှေ.မရှောငျပေါ.ဗြာ။ လူပြိုပေါကျဘဝထဲက အတှေ.အကွုံတှရှေိလာတော. ဆရာဝနျလဲ ဖွဈကော ဘာပွောကောငျးမလဲ လိမျ.လို. သိပျကောငျးပေါ.ဗြာ။ အခုပွောမှာက ကတြျောနဲ. မနျးတလေးမှာ တှေ.ကွုံခဲ.ရတဲ. အဖွဈအပကျြကိုဗြ။
ကတြော.မိနျးမက နပွေညျတျောမှာ တာဝနျကတြယျ ကတြျောကတော. မနျးလေးမှာပေါ.။ တရကျ နပွေညျတျောကနေ မိနျးမနဲ. တှေ.ပွီး အပွနျ လိုငျးကားပျေါမှာ မိတျဆှတေဈယောကျရခဲ.တယျ။ အဲ.ညီလေးနာမညျက ကောငျးမွတျ။ သူ.အသကျက ၂၈နှဈ ရှိပွီ။ လူကောငျကပိနျပိနျသှယျသှယျ စကားပွောရညျမှနျတယျ။သူကလဲ အိမျထောငျကပြွီးသား နပွေညျတျောကို အလုပျနဲ.လာတာ။ အိမျထောငျကပြွီးမှ ပိုပွီး အလုပျတှရေလာလို. နယျပဲ တောကျလြောကျ ထှကျနရေတာ။ တခါတလမှေပဲ အိမျမှာ ၃၊၄ရကျနနေိုငျတယျတဲ.။ ကိုတှနေဲ. ဘဝတူတှဆေိုတော. လမျးမှာ စကားပွောလာတာပေါ.။ သူ.မိနျးမက ဆရာဝနျပေါကျစတဲ.။
နာမညျက သကျမှနျတဲ.။ အခု==ဆေးရုံမှာ တာဝနျကတြယျတဲ.။ သူ.မိနျးမက အရမျးခြောတယျ၊ အရမျးလဲ ခဈြဖို.ကောငျးတယျ၊ အရမျးလဲခဈြတယျတဲ.။အဲ.လိုပွောပွီး ဖုနျးလေးနဲ. သူတို.မင်ျဂလာဆောငျတုနျးကပုံလေးကို ပွတယျ။ သခြောသှားပွီ ကတြော.လကျအောကျမှာ တာဝနျကတြဲ. ဆရာဝနျမလေးဆိုတာ။ အစက နာမညျပဲ တူတယျ အောကျမေ.နတော။ ယောကျြားသားခငျြး စကားပွောနရေငျး အိမျထောငျရေး အဆငျပွလေားဆိုပွီး အိမျထောငျရေးအကွောငျးရောကျသှားတော. ကတြျောတို. လငျမယားကတော. အဆငျပွတေယျညီရေ။နားလညျမှုတှယေူထားကွတယျ။ ညီတို.ကော အဆငျပွရေဲ.လား။ ကိုယျတို.က တယောကျတနယျဆီနကွေတာဆိုတော. ဒီလိုညှိနှိုငျးထားမှ အဆငျပွတော ဆိုတော. ကတြျောကတော. ပွပေါတယျဗြာ။ မိနျးမသာ ပွမေပွေ မသိတာ ကတြော.မိနျးမ သကျမှနျတယောကျ နလေို.ထိုငျလို.ကောငျးပါ.မလားမသိဘူး။ ကတြျောက အမွဲ ခရီးထှကျ ပွနျရောကျတော.လဲ ပငျပနျးပွီး တနျးအိပျနဲ. မင်ျဂလာဆောငျထားတဲ. ၂ နှဈအတှငျး သိပျတောငျ မိနျးမနဲ. မနဖွေဈပါဘူးအကိုရယျ။
ကွာတော. သကျမှနျကိုတောငျ အားနာမိတယျ။ အဲ.တာဆို ဘယျအဆငျပွမေလဲညီရဲ. တကိုယျကောငျးဆနျသလိုဖွဈနမှောပေါ. ညီကတော. ကောငျးပွီး သူ.ကမြှ လိုအပျနတေယျဆိုတော.။ ကတြျောလဲ ဘယျလိုလုပျရမလဲ မသိတော.ပါဘူးဗြာ။အခုလဲ ဆေးရုံမှာ နရေငျး သူတို.ထဲက သူငယျခငျြး တဈယောကျယောကျနဲ. ဖွဈသှားရငျတောငျ ကောငျးမယျလို. တဈခါတဈခါတှေးမိတယျ ခဈြတဲ.ကွိုကျတဲ. အထိတော. မဟုတျဘူးပေါ. အကိုရယျ။ အာသာပွရေုံလောကျတော. ခှငျ.လှတျပေးနိုငျမလားလို. ကိုယျ.ကိုကိုယျပွနျမေးနမေိတယျဗြာ။ အရမျးခဈြတော. သူစိတျကနြေပျသှားရငျကို ကနြေပျနတေော. ခှငျ.ပွုနိုငျမယျထငျတာပဲဗြာ။ ကတြော.မိနျးမတော. မသိသေးပါဘူး။ ပွောလဲ မပွောရဲဘူး။ ဒါပမေယျ. သူစိတျပါလို. လုပျလိုကျလဲ ကတြျောသူ.ကို အပွဈမတငျရကျပါဘူးလေ အကိုရယျ။ ဒါနဲ.ပဲ ကတြျောလဲ ကောငျးမွတျကို အကွံညာဏျတှပေေးလိုကျတယျ ဘယျလိုပွော ဘယျလိုလုပျဆိုပွီးတော.ပေါ.။ လိုအပျရငျ ဖုနျးဆကျဆိုပွီး ကတြော.ဖုနျးနံပါတျလဲပွော သူ.ဖုနျးနံပါတျလဲ တောငျးလိုကျတယျ။ ကတြျောကတော.တှေးနပွေီ သကျမှနျကို ဘယျလိုဖနျရမလဲဆိုတာ။ဟီးဟီး။ ဒီလိုနဲ. ကောငျးမွတျတဈယောကျ အိမျပွနျရောကျတော. သူ.မိနျးမက ရခြေိုးခနျးထဲမှာ ရခြေိုးနတေယျ။
သူလဲ ပငျပနျးလာတာနဲ. ခနနား ရခြေိုးမယျဆိုပွီး စောငျ.နတေယျ။ သကျမှနျတဈယောကျရခြေိုးတာ ကွာလို. ရခြေိုးခနျးကို သှားကွညျ.တော. တံခါးပိတျထားလို. တံခါးခေါကျမလို.လုပျတုနျး အထဲက အသံတှကွေားလိုကျရတယျ။ သကျမှနျတဈယောကျ ဖီးတှတေကျနတေဲ. အသံလို.ထငျရတဲ. အသံတှေ ကွားလိုကျရတယျ။ ဒါနဲ. သူ.မိနျးမသူ ပွနျခြောငျးဖို. လုပျရတော.တာပေါ.။ရှာရငျးနဲ. ရခြေိုးခနျး အနံ.ထုတျပနျကာပေါကျကိုတှေ.သှားတော. ခုနျတဈခုနဲ. ခုပွီး တကျကွညျ.လိုကျတယျ။ ပနျကာက ဖုနျတှတေကျသံခြေးကိုကျလို. မလညျတော.တာကွာနပွေီဆိုတော. ကှကျတိပဲ။ ကောငျးမွတျတဈယောကျ သူ.မိနျးမကို သူပွနျခြောငျးရတာကို အတျော ရငျခုနျနတေယျ။ သူ.မိနျးမ ဘာတှလေုပျနလေဲပေါ.။ ရခြေိုးခနျးထဲမှာ သကျမှနျတဈယောကျ သူ.စောကျဖုတျလေးကို ဖွဲပွီး အစိလေးကို လကျလေးနဲ. ပှတျပေးနတေယျ။ ကောငျးလိုကျတာကိုရယျ။ ကောငျးလိုကျတာ အရမျးကောငျးတယျ ညီမကို အဲ.လိုလေးပှတျပေးတာ ကောငျးလိုကျတာ။ကိုကိုစိုးပှတျပေးတာ အရမျးကောငျးတာပဲ သကျမှနျ အရမျးကွိုကျတယျ။
အစိလေးကိုနာနာလေးပှတျပေးပါ ဆိုပွီး ပွောပွောပွီးစောကျစိလေးကိုပှတျ နို.လေးကိုညှဈလိုကျ လုပျနတေယျဗြာ ကောငျးမွတျတဈယောကျ ရငျတှခေုနျနတေယျ။ ခုနပွောသှားတဲ.ထဲ ကိုကိုစိုးလို. ပါလာတော. ဒါ သူ.နာမညျမဟုတျဘူး ဘယျသူ.နာမညျလဲမသိဘူး။ သကျမှနျ အရငျရိးစားနံမညျလားဘာလဲပေါ.။ဒါပမေယျ. အဲ.လို တခွားသူကို မှနျးပွီး ဖီးလျတကျနတေဲ. သူ.မိနျးမကို မွငျရတာကိုက ကောငျးမွတျအတှကျတော. တကယျ.ကို ကနြေပျစရာကွီးပေါ. စိတျထဲမှာ သူ.ကိုမတောငျ.တပဲ တခွားတဈယောကျကို တမျးတနတောတှေ.တော. စိတျထဲမှာ နလေို.မကောငျးပမေယျ. သူ.မိနျးမ တခွားတဈယောကျကို တမျးတပွီး ကနြေပျပွီး ကောငျးနတောတှေ.တော. ကောငျးမွတျလဲ အလှနျကနြေပျနမေိတယျ။ ဒါ လမျးမှာ တှေ.တုနျးက အကို ကိုအောငျမွတျပွောလိုကျသလို ကပျကိုးဖီလငျဆိုတာမြားလား။
ဖွဈနိုငျတယျ သူ.မိနျးမကို တခွားတဈယောကျက စိုကျကွညျ.နရေငျ သူကနြေပျတယျ။ သူ.မိနျးမ မွနျမာဝတျစုံ ကပျကပျရပျရပျလေးတှဝေတျလိုကျရငျ ခန်ဒာကိုယျကို ထငျးထငျးရငျးဖွဈနတောကို တခွားယောကျြားသားတှကွေညျ.ရငျ သူကနြေပျနတောတှကေ ကပျကိုးရဲ. အစဖွဈနိုငျတယျ။ အခုလဲ သူ.မိနျးမ သကျမှနျတဈယောကျ တခွားယောကျြားတဈယောကျနံမညျကို ရှတျပွီး ဖီးတကျနတောကွညျ.ရငျး သူလဲ ဖီးတှတေကျလာတယျ အဲ.ဒီလိုမြိုးကို ပိုကွိုကျမိနတေယျ။ သူဘယျလိုလုပျရမလဲ။ ခနနတေော. သကျမှနျရခြေိုးပွီး ထှကျလာတော. ကောငျးမွတျက အိပျယာပျောမှာ အိပျပြျောနတေယျ။ သကျမှနျလဲ အဝတျအစားလဲပွီး သူ.ယောကျြားကောငျးမွတျကို နှိုးလိုကျတယျ။ အဲ.ကမြှ ကောငျးမွတျက အိပျယာကနေ လူးလဲထပွီး ညစာသှားစားဖို.ပွောတယျ ဒီနေ. ညစာအပွငျထှကျစားရအောငျလို.။
မိနျးမကို ဒီအဝတျတှေ မဝတျနဲ. ဒီည မိနျးမအတှကျ ကိုယျရှေးထားတယျ ဒါလေးတှဝေတျဆိုပွီး အဝတျတှထေုတျပေးတော. သကျမှနျက ဒါတှေ တကယျဝတျရမှာလား အငျးပေါ. သကျမှနျရဲ. ဝတျရမှာပေါ. လို.ပွောတော. သကျမှနျက ဝမျးသာသှားတဲ. မကျြနှာလေးနဲ. အဝတျတှသှေားလဲလိုကျတယျ ကတြျောလဲ ရခြေိုးခနျးထဲ ဝငျပွီး ရခြေိုးပွီး ထှကျလာတော. သကျမှနျလေ အရမျးကို ဆကျဆီကပြွီး လှပနတေယျ စကပျအတို အကွပျ အကငြ်္ီအကွပျ အတှငျးခံဘျောလီက ပါးပါးနဲ.ဆိုတော. နို.သီးခေါငျးလေးတှကေ ထငျးလို. အောကျခံဘောငျးဘီကလဲ ဂြီစတငျးဆိုတော. ကွိုးလိုငျးလေးတှထေငျး ဖငျသားအလုံးလိုကျထှကျနတေော. အရမျးကို ဆကျဆီဖွဈနတေယျ။ သကျမှနျကော ကွိုကျရဲ.လား ကိုယျဝတျခိုငျးတာလေးတှကေို။ ကွိုကျတာပေါ. ကိုရဲ. ကိုမကွိုကျမှာဆိုးလို. သကျမှနျက ထုတျမဝတျတာ။ အမွဲတမျးဂြူတီကုတျကွိးနဲ. နနေရေတော. မှနျးကွပျနတော တခါတလေ ဒီလို ပေါ.ပေါ.ပါးပါး လှတျလှတျလပျလပျ လေး စိတျကွိုကျ ဝတျခငျြတာပေါ.။
ကိုကကော ကို.မိနျးမ ဒီလို ဝတျတော. တခွားယောကျြားသားတှေ ကွညျ.ပွီး ငမျးမှာကို ဘယျ.နှဲ.မှ မနဘေူးလား။မနပေါဘူး ကို.မိနျးမက ပစ်စညျးရှိလူတနျးစားမို. ကွညျ.တာ ကွညျ.ပါစပေေါ. သူတို.လဲ ဘာမှမှလုပျလို.မရတာ သူတို.အဲ.လို ကွညျ.လေ ကိုပိုပွီး အားရှိလပေေါ. အရမျးလှတဲ. သူလေးကို ပိုငျဆိုငျခှငျ.ရထားလို.။ ဟုတျပါပွီ ကိုရယျ။ သကျမှနျက ကိုမကွိုကျမှာ စိုးလို.ပါ။ ကိုကကွိုကျတယျဆိုတော. နောကျလဲ သကျမှနျ ဒီလိုမြိုးဝတျမယျနျောကို။ ဝတျပါဗြာ ဝတျပါ၊ ကို မနျးလေးမှာ မရှိတဲ.နေ. ဝတျမယျဆိုရငျ ကို.ကို ဓါတျပုံလေးတော. ရိုကျပို.ပေး။ ကိုလဲ ကို.မိနျးမ အလှကို ကွညျ.ပွီး အားရပါးရမှနျးရအောငျလို.။ ဟုတျပါပွီ ကိုရယျ သကျမှနျ အဲ.လိုဝတျရငျ ကို.ကို ဓါတျပုံရိုကျပို.ပေးမယျ။
ဘယျသှားမယျ ဘာလုပျမယျဆိုတာက အစ ပွောပွမယျ ။ ကိုက မခြုပျခယျြ မတားဆီးရဘူးနျော။ အငျးပါကှာ။ လာသှားကွမယျ။အဲ.ဒါနဲ. ကတြျောတို.လငျမယားလဲ ၇၃လမျးက mingalar Mandalay အိုးရှငျးကို ထှကျလာခဲ.လိုကျတယျ။ ဒီနေ.က ရုံးပိတျရကျဆိုတော. အဲ.မှာ လူရှုပျမယျဆိုတာသိလို. တမငျ ထှကျလာခဲ.လိုကျတယျ။ လမျးလြောကျဈေးဆိုတော.လမျးလြောကျပွီး လြောကျသှားကွညျ.တာပေါ.။ လမျးပျေါက ဘဲတှဆေို ကတြော.မိနျးမ သကျမှနျကို မွငျတာနဲ. တငျ ငမျးတော.တာ အကွီးအကယျြပဲ တခြို.ဘဲတှဆေို ကတြျောတို.နောကျကနကေို လိုကျရှိုးတာဗြာ။
မိနျးမက ကတြော.ကို ငဲ.ကွညျ.ငဲကွညျ.နဲ. ကို အဆငျပွရေဲ.လားတဲ. သူမြားတှေ လိုကျကွညျ.နတေယျတဲ. ။ ကတြျောကလဲ သကျမှနျ ကွိုကျတယျမို.လားဆိုတော. ကွိုကျတယျတဲ.။ ကိုလဲကွိုကျတယျ အဲ.လို ကွညျ.ခံရတာ ဘယျလိုနလေဲဆိုတော. တမြိုးပဲ အရမျးကောငျးတယျ။ညီမလေးထဲမှာတောငျ လှိုကျယားလာတယျ။ ဒါဆို ညကြ ရှယျပွူစုပေးရမယျပေါ. ဆိုတော.။ အငျးပေါ.ကိုရဲ. ကိုကရှယျပွုစုပေးမှရမှာပေါ. သကျမှနျမှာ ပွုစုပေးမယျ.လူဆိုလို. ကိုပဲရှိတာကို။ဒီလိုနဲ.လကျြေသှားကွညျ.ရငျးနဲ. အိုးရှငျးပျေါတကျပွီး YKKOမှာ ကွေးအိုးသှားစားကွတယျ။ ပွီးတော. သကျမှနျက တှိုငျးလကျသှားခငျြတယျဆိုလို.လိုကျပို.လိုကျတယျ။ ကတြျောလဲ တှိုငျးလကျထဲ ခနသှားလိုကျတယျ။ ကတြျောပွနျထှကျလာတော. သကျမှနျကို မတှေ.တော.ဘူး အဲ.ဒါနဲ. လိုကျရှာတော. အပွငျမှာ ယောကျြားတဈယောကျနဲ. စကားပွောနတောတှေ.လိုကျတယျ။
အနားရောကျမှ အံ.သွသှားတယျ။ ကတြျောနဲ. လမျးမှာ တှေ.ခဲ.တဲ. သူ ကိုအောငျမွတျ။ သူက ကတြော.မိနျးမနဲ. စကားလကျဆုံကနြတေယျဗြာ။အဝေးကနသေူတို.နှဈယောကျကိုကွညျ.ရငျး ထောငျထောငျမောငျးမောငျး ယောကျြားတဈယောကျနဲ. လူကောငျသေးသေး ကတြော.မိနျးမကို အဲ.လိုမွငျလိုကျရတော. ကတြော.စိတျထဲ တမြိုးကွီးဗြာ ဘယျလိုဖွဈသှားမှနျးတော. မသိဘူး ဒါပမေယျ.ကနြေပျမှုလေးတော. ဖွဈသှားတယျ။ သကျမှနျက ကတြော.ကို မွငျတော. လှမျးပွီး လကျပွတယျ။ ကတြျောလဲ ခပျသှကျသှကျလြောကျလာပွီး အနားရောကျတော. သကျမှနျက ကတြော.ကို မိတျဆကျပေးတယျ။
ဒါ သူရဲ. ဆရာ ဆရာ ဦးအောငျမွတျတဲ. အခုမှ ပွောငျးလာတာ သိပျမကွာသေးဘူးတဲ. ဆရာ. အမြိုးသမီးကလဲ အရမျးခြောတာတဲ. ဆရာ.အမြိုးသမီးကတော. နပွေညျတျောမှာသကျမှနျထကျ တတနျးကွီးတယျ သူလဲ ဆရာဝနျပဲလို. မိတျဆကျပေးတော. ကိုအောငျမွတျက တှေ.ရတာ ဝမျးသာပါတယျ ကိုကောငျးမွတျရဆေိုတော.။ သကျမှနျက ဟငျ ကိုနဲ.ဆရာနဲ.က သိနတောပေါ. ဆိုတော. လမျးမှာ ကားစီးရငျးနဲ. တှကွေတာပါလို. ကိုအောငျမွတျက သကျမှနျကို ပွနျဖွပေေးရငျး ခေါငျးလေးကို ပုတျလိုကျတယျ။ကတြျောက ကိုအောငျမွတျကို လှမျးကွညျ.တော. သူက ခငျမြားရရဲ.လားဆိုတဲ.အထှာနဲ. ပွနျကွညျ.တယျ။ ကတြျောက သကျမှနျမမွငျအောငျ လကျမထောငျပွလိုကျတော. ကိုအောငျမွတျက အိုကတေဲ.။
ဒီလိုနဲ. သကျမှနျက အလယျက ကတြျောနဲ. ကိုအောငျမွတျနဲ.က ဘေးနှဈဘကျကနေ လြောကျလာနတေုနျး ကောငျမလေးတဈသိုကျက ကတြျောနဲ. သကျမှနျကွား အတငျးတိုးဝငျတော. ကတြျောက ဘေးရောကျသှားတယျ သကျမှနျက နဲနဲယိုငျသှားတော. ကိုအောငျမွတျက သကျမှနျ ခါးလေးကို ကိုငျပွီး ထိနျးထားတယျ။ သကျမှနျက သတိမထားမိတာလားဘာလားမသိဘူး ဘာမှ ပွနျမပွောဘူး။ကတြော.ဘေးလဲ ပွနျကပျမလာဘူး။ မသိရငျ သူတို.နှဈယောကျကပဲ လငျမယားအတှဲ ကိုက သူငယျခငျြးလို ဖွဈနတေယျဗြာ။ ကိုအောငျမွတျက အတျောဆိုးတဲ.လူ ကတြျော.ကိုလှညျ.ကွညျ.ပွီး ကတြော.မိနျးမ တငျပါးလေးကို ခပျပါးပါးလေးပုတျပွတယျဗြာ ကတြျော.ရငျထဲမှာ တဒိနျးဒိနျးနဲ. အရမျးသဘောကပြွီး ကိုအောငျမွတျကို ပွုံးပွလိုကျတယျ ။ သကျမှနျကတော. သူ.ဘေးနားကလူကို သူ.ယောကျြားမြားထငျနလေားမသိဘူး ဘာမှကို ပွနျမပွောတာ။
အဲ.လိုနဲ. ရှိုးပှဲရှေ.ရောကျတော. ကိုအောငျမွတျက သကျမှနျကို ရှေ.နားရောကျအောငျ တိုးရငျးတိုးရငျးနဲ. ချေါသှားတော. ရှေ.အတျောရောကျသှားတယျ ကတြျောကတော. နောကျနားမှာ ကနျြနခေဲ.တာပေါ.ဗြာ။ ကတြျောက ရှိုးပှဲမှာ ဘယျသူဆိုနလေဲ ဆိုတာတောငျ အာရုံမရတော.ပါဘူးဗြာ။ ရှေ.က ကတြော.မိနျးမ သကျမှနျနဲ. သူ.ဆရာ ကိုအောငျမွတျတို.ကိုပဲ လိုကျကွညျ.နမေိတယျ။ ကတြျောကလဲ ခှငျ.ပေးထားတယျဆိုတော. ကိုအောငျမွတျက ကတြျောမွငျသာအောငျကို သကျမှနျဖငျသားလေးတှကေို ကိုငျတော.တာဗြို. ပွီးတော. သကျမှနျကိုလဲ ဒီနားတိုးဆိုးပွီး သူ.ရငျခှငျထဲ ဆှဲထညျ.ထားသေးတယျ။ မိနျးမကတော. သူ.ယောကျြား တဈယောကျလုံး ပါလာတာကို မေ.နလေားမသိဘူး ။ ခနလောကျနတေော. ကိုအောငျမွတျက သကျမှနျကို သူ.ရှေ.လာခဲ.ဆိုပွီး ရှေ.ကိုပို.လိုကျတယျ သူကတော. နောကျကနေ သကျမှနျကိုသိုငျးဖကျထားတယျ ဘာတှလေုပျနလေဲဆိုတာတော. ကတြျောလဲ မမွငျလိုကျရဘူး။ ဒါပမေယျ. အဲ.လို ကို.ရှေ.မှာပဲ ကို.ရဲ.မိနျးမကို တခွားတဈယောကျက ကိုငျတှယျတာကို ကွညျ.ပွီး သာယာနမေိတယျဗြာ။
ဒီလိုနဲ.ပဲ ရှိုးပှဲမပွီးခငျ ကိုအောငျမွတျက ပွနျခငျြတယျဆိုတော.မှ ကတြျော.မိနျးမကို ကတြော.ဆီပွနျပို.ပွီး သူကတော. အေးအေးဆေးဆေးပွနျသှားတယျဗြာ။ ကတြျောနဲ. သကျမှနျတို.နှဈယောကျကတော. ရငျခုနျစရာအပွညျ.နဲ. ကနျြနခေဲ.တာပေါ.။အဲ.ညက ကတြျောအတျောကို ထနျနတေော. ဆေးကူပွီး သကျမှနျကို တှယျလိုကျတယျဗြာ စစခငျြး စောကျဖုတျကိုတဈခြီ၊ နောကျလေးဖကျကုနျးခိုငျးပွီး ဖငျကိုလိုးတာတဈခြီ၊ သူက အပျေါကနတေကျဆောငျ.တာတဈခြီ နောကျဆုံးပိတျစားပှဲပျေါလကျထောကျခိုငျးပွီး နောကျကနလေုပျရငျးနဲ. ပွီးခါနီးမှ ဖငျပေါကျထဲ ပွောငျးထညျ.ွ့ပီး တဈခြီပွီးလိုကျတယျ လူလဲ မွော.သှားတာပဲ။ သကျမှနျကတောငျ အံ.သွနတေယျ။ ကို ဒီနေ.အတျောကို အားတှရှေိနတေယျပေါ. ဟုတျလားတဲ. ။
ကတြျောကလဲ အငျးဟုတျတယျ သကျမှနျဆရာက လကျယဉျတယျနျောဆိုတော. အကို တှေ.တယျပေါ. သကျမှနျကို ဆရာဘယျလိုလုပျနလေဲဆိုတာ။ အငျး ဟုတျတယျ။ သကျမှနျကလဲ ကိုတဈယောကျလုံးပါလာတာကို တောငျ သတိမရတော.ဘူးမဟုတျလား ဆိုတော. သကျမှနျက “မဟုတျရပါဘူးကိုရယျ သကျမှနျက ဆရာ.ကိုကွောကျရတယျ ဆရာက အရမျးစိတျကွီးတာ ဆရာခိုငျးတာ မလုပျနိုငျရငျ ဆရာက စိတျတိုတတျတယျ။ ဆရာက မရိုငျးပမေယျ. သူ.စိတျနဲ. မတှေ.ရငျ သကျမှနျတို.ကို ငေါကျတတျတယျကိုရဲ. အဲ.ဒါကွောငျ.ပါ။ ဒါပမေယျ. ကိုက တှေ.တယျလို.သာပွောတာ စိတျဆိုးပုံလဲ မရဘူး” “အငျး ဟုတျတယျ သကျမှနျ ကိုလဲ ဘာတှဖွေဈနလေဲ မသိဘူး”
“ ဘာလဲ ဆရာက အဲ.လိုကိုငျတာတှေ.ပွီး သကျမှနျကို ဒီနေ.ည စိတျတှအေရမျးပါလာတယျဆိုပါတော.” “ အငျး ဟုတျတယျသကျမှနျ စိတျတော.မဆိုးနဲ.ကှာ။ ဒီနေ.ည ကိုက သကျမှနျကို တကျလုပျနပေမေယျ. ကို.စိတျထဲမှာ ကိုအောငျမွတျက သကျမှနျကို တကျလုပျနတေယျလို. ခံစားရပွီး အရမျးကိုကောငျးနတော” “ ဟယျ အဲ.လိုကွီးလား ကိုက” “ ဟုတျတယျသကျမှနျရေ ယောကျြားကို စိတျမဆိုးနဲ.နျော” “ ဟုတျပါပွီ ကိုရယျ အပွငျမှာ တကယျဆိုလဲ သကျမှနျကို ကိုက စိတျပွနျမဆိုးနဲ. ဒါပဲ” “ အပွငျမှာ….. ဟုတျလားသကျမှနျ” “ အငျးပေါ. ဆရာက သကျမှနျကို အရမျးဖဘောပေးတာ အကိုရဲ. သကျမှနျကိုလဲ ဆေးရုံမှာ ဟိုကိုငျဒီကိုငျကိုငျတတျတယျ။ အဲ.အဆငျ.ထကျတော. မပိုပါဘူး။
ဒါပမေယျ. သကျမှနျက အဲ.အဆငျ.ထကျလဲ မကြျောရဲဘူး” “ ဟာရတယျ သကျမှနျ ကို.ကိုသာ ပှငျ.ပှငျ.လငျးလငျးပွော သကျမှနျ ဘာဖွဈခငျြတယျ ဘာလုပျခငျြတယျ ပှငျ.ပှငျ.လငျးလငျးနဲ. ကို.ကိုသာပွောပွီးလုပျ ကိုအားလုံး ခှငျ.ပွုတယျ” “တကယျလားကိုရယျ” “ တကယျပေါ. သကျမှနျရယျ” “ အငျး ပွောပွရအုံးမယျ ယောကျြားကို ဆရာ.အကွောငျး” “အငျးပွောပွလေ သကျမှနျ” “ ဆရာ.မှာ မိနျးမရှိတယျဆိုတာ အကိုသိတယျနျော။ဆရာ.မိနျးမနံမညျက မဖွူဖွူဖှေးတဲ.။ သူ.မိနျးမက သကျမှနျတို.ဆေးကြောငျးကပဲ။ အတနျးတော.ကွီးတယျ။ ဒါပမေယျ. သကျမှနျတို.နဲ. အဆောငျတူတော. ညီအမတှထေကျတောငျ ခငျသေးတယျ။ ကြောငျးတုနျးက ကဲဖျောကဲဖကျ သှေးသောကျ ညီအမတှပေေါ.။ သူ.အကွောငျးကိုသိ ကို.အကွောငျးသူသိ။
သူယောကျြားရသှားတော. ညီမက အကိုနဲ. လကျထပျပွီးကာစ သိပျမကှာဘူး။ အဲ.တုနျးက သူကရနျကုနျမှာ မင်ျဂလာဆောငျတာဆိုတော. သကျမှနျတို. မသှားလိုကျရဘူး။ သူတို. မင်ျဂလာဆောငျပွီးတော.မှ သကျမှနျနဲ. ပွနျတှေ.တာ ဆရာနဲ.တော. အဲတုနျးက အတှေ.ခဲ.ရဘူး။ ဒါပမေယျ. ဆရာ.အကွောငျးတော. အတျောသိခဲ.ရတယျ။ ဖွူဖှေးက သကျမှနျကို အကုနျပွောပွတယျ ပွီးတော. သကျမှနျကိုလဲမေးတယျ မတှေ.တာကွာတဲ. ညီအမနှစယောကျပွနျတှေ.တော. တယောကျအကွောငျးတဈယောကျမေးကွ တှတျထိုးကွတာပေါ. အကိုရယျ။ အဲ.မှာ ဖွူဖှေးက သူ.ယောကျြား အိပျယာပျေါမှာ ဘယျလောကျတောငျ ကောငျးအောငျလုပျနိုငျတဲ.အကွောငျး သူ.ယောကျြားပစ်စညျး ဘယျလောကျကွီးကွောငျးတှေ ကွှားတာပေါ.။ သူ.ယောကျြားက သူ.ကိုယျသူအတှကျတငျမဟုတျပဲ သူ.ကိုလဲ အလေးထား ဆကျဆံတယျတဲ.။
လိုးရငျလဲ ဖွူဖှေးကို အကွိမျကွိမျပွီးအောငျလိုးပေးပွီးမှ သူက ပွီးတာတဲ. အကိုရဲ.။ ပွီးတော. သူ.လီးကွီးက အတျောကိုကွီးတာတဲ.။ ပွီးတော. ဖွူဖှေးက အပြိုမစဈတာကို သူကသိတယျတဲ. သူနားလညျပေးနိုငျတယျတဲ.။နောကျကိုသာ သူမသိအောငျမလုပျဖို.နဲ. လုပျခငျြစိတျပေါကျလာရငျ သူ.ကို အသိပေးပွီး လုပျဖို. သခြောကို မှာထားတာတဲ.။ သူလဲပဲ တခွားတဈယောကျနဲ. ဖွဈရငျပွောပွတယျတဲ.။ ဒါပမေယျ. ဆရာက အဝေးမှာ နရေတော. ဖွူဖှေးက နားလညျပေးနိုငျတယျ သူ.အတှကျတော. မလိုဘူးပေါ.။ ဒါပမေယျ. ဆရာက မိနျးမလဲ သှေးသားနဲ.ပဲ တောငျ.တလာရငျ အဆငျပွအေောငျ ဖွရှေငျးဖို. ယောကျြားကို အားမနာဖို. ပွောပွထားတယျတဲ.” “ဆရာနဲ.အကိုနဲ. တူတာရှိတယျ။
အဲ.တာက အပေါကျစုံအောငျကိုလုပျတာ။ အကိုလဲ သကျမှနျကို အရှေ.အနောကျပါးစပျ စုံအောငျလုပျသလို ဆရာကလဲ ဖွူဖှေးကို အစုံလုပျတယျတဲ.။ ဖွူဖှေးကတော. ဆရာတပတျတခါလာတာနဲ.တငျကို အတျောကောငျးဆိုပဲ တခါဆို ဆိုသလောကျကောငျးအောငျကို လိုးပေးသှားတာ။” “ ဟီး အားကစြရာကွီး။” “ ဟုတျပါပွီ မိနျးမရယျ၊ ကိုအောငျမွတျကွီးကလဲ ငါ.မိနျးမလေးကို လိုးခငျြနလေို. နမေယျဖငျလေးကို လာလာကိုငျတာ။” “ကိုအောငျမွတျနဲ.ဆို အကိုခှငျ.ပွုပါတယျ သကျမှနျ။ ဒါပမေယျ. ကို.ကိုတော. အကုနျပွောပွရမယျနျော။” “အငျးပါ ကိုရဲ. သခြောကို ပွောပွမယျ။” နောကျရကျကတြော. ကောငျးမွတျက အလုပျနဲ. ခရီးထှကျသှားတယျ။ သကျမှနျတဈယောကျ ကောငျးမွတျဆီက ခှငျ.ပွုခကျြရပွီဆိုတော. ရငျတှခေုနျနမေိတယျ။ ဒီနေ.ဆရာနဲ.တှေ.ရမှာတှေးပွီး ညီမလေးတောငျ လှိုကျပွီး ယားလာတယျ။
ဒီနေ. ခန်ဒာကိုယျအလှကို ပိုပျေါတဲ. မွနျမာဝတျစုံ အကွပျကလေးကို ဝတျရငျး မှနျထဲမှာ ကိုယျ.ကိုကို ပွနျကွညျ.မိတယျ။ ဒီပုံစံလေးနဲ.ဆို ဆရာတော. အရမျးကွိုကျနမှောပဲလို.။ဒီလိုနဲ. ဆေးရုံရောကျတော. ထုံးစံအတိုငျး အလုပျတှေ အလှနျရှုပျ တနေ.လညျလုံး မနားလိုကျရဘူး။ ဆရာလဲ ဝတျထဲ ဟိုဒီပွေးနရေတယျ။ နေ.လညျစာစားပွီးတော.မှ အလုပျလေးနဲနဲပါးပါး လုပျနတေုနျး ဆရာရယျ နောကျကနရေောကျလာပွီး သကျမှနျဖငျလုံးလေးကို ကိုငျပွီး “ နေ.လညျစာစားပွီး ပွီလား ”တဲ.။ သိပျဆိုးတဲ.ဆရာ။ “စားပွီးပွီဆရာ ” ဆိုတော. “ဆရာ. အခနျးကို ခနလောကျလိုကျခဲ.ပါလား။” သကျမှနျလဲ “ဟုတျကဲ.ဆရာ ခနနလေိုကျလာခဲ.လိုကျပါ.မယျ” လို. ပွနျဖွလေိုကျတော. ဆရာက သကျမှနျဖငျလုံးလေးကို ညှဈပွီး ပုတျပွီး “ ဒါဖွငျ. ဆရာ အခနျးကစောငျ.နမေယျ သိပျမကွာစနေဲ. ” လို.ပွောပွီး ထှကျသှားတယျ။ သကျမှနျလဲ အလုပျတှကေို မွနျမွနျဖွတျပွီး တှိုငျးလကျ ခနသှား သသေခြောခြာ သနျ.ရှငျးရေးလုပျပွီး ဆရာ.ဆီ ထှကျလာခဲ.လိုကျတယျ။
ဆရာ.အခနျးရှေ.ရောကျတော. တံခါးကိုခေါကျလိုကျပွီး ဝငျခဲ.ရမလားဆရာဆိုတော. ဆရာက ဝငျခဲ.တဲ.။အခနျးထဲရောကျတော. ဆရာက တံခါး လော.ခထြားလိုကျ တခွားသူတှေ ဝငျလာလိမျ.မယျတဲ.။ဒါနဲ လော.ခပြွီး ဆရာ.နားကို သှားလိုကျတယျ။ အနားကိုရောကျတော. ဆရာက မတျတပျရပျလိုကျပွီး သကျမှနျ.အနားကို ကပျလာပွီး ဂြူတီကုတျလေးကို ဆှဲခြှတျလိုကျတယျ။ နငျ.အလှက အဲ.ကုတျအောကျမှာ ပြောကျနတေယျ။ အဲ.ဒါမပါမှ ပိုလှတာဆိုပွီး သကျမှနျရဲ. ဖငျလုံးလေးတှကေို ကိုငျညှဈပေးလိုကျတယျ။ သကျမှနျရငျဘတျထဲ အရမျးကို ကနြေပျသှားတယျ။ဒီလိုနဲ. ညနရေောကျတော. ဂြူတီကထှကျရတော. ဆရာပေးလိုကျတဲ. ပစ်စညျးလေးတှေ သခြောသိမျးယူပွီး အိမျကိုပွနျလာခဲ.လိုကျတယျ။ မနကျဖွနျ တနေ.လုံး ဂြူတီမရှိဘူး။ ညဂြူတီပဲ ဆငျးရမှာ။ အိမျပွနျရောကျတော. ရမေိုးခြိုး ပွီး ခနနားနလေိုကျတယျ။ ညကြ ဆရာက ညနစောလိုကျကြှေးခငျြတယျတဲ.။ မငွငျးရဲတော. လကျခံလိုကျမိတယျ။ည၇နာရီလောကျ လာချောမယျတဲ.။ဘာဝတျသှားရငျ ကောငျးမလဲလို. ကောငျးမွတျကို ဖုနျးဆကျမေးလိုကျတယျ။ “အကိုလား၊ သကျမှနျပါ၊ အငျး ဆရာနဲ. ခြိနျးထားလို.၊ ညစာသှားစားမလို.လေ၊ အဲ.ဒါ သကျမှနျ ဘာဝတျသှားရငျကောငျးမလဲလို. လှမျးမေးတာ ကိုကောအလုပျက အဆငျပွရေဲ.လား” “အဆငျပွပေါတယျ မိနျးမရေ။
ဟငျ တဈရကျထဲနဲ.ကို ကိုအောငျမွတျကွီးက ဒိတျတော.တာပဲ၊ မိနျးမကလဲ ဟနျကို မဆောငျနိုငျဘူး၊ တနျးလိုကျသှားတော.မယျပေါ.လေ၊ဟုတျလား” “အငျးပေါ. ကိုရဲ.၊ ကိုကလဲခှငျ.ပေးထားတာပဲကို၊ ကို ခှငျ.မပွုရငျ သကျမှနျ မသှားတော.ပါဘူး၊ ဆရာ.ဆီ ဖုနျးပွနျဆကျလိုကျမယျ၊ မသှားဖွဈဘူးလို.” “ဟာ သကျမှနျကလဲ၊ ကိုက ခှငျ.ပွုပါတယျမိနျးမရဲ.၊ ကကြေနြေပျနပျကွီးနဲ.ကို ခှငျ.ပွုပါတယျကှာ၊ ကိုယျ.ကိုတော. အကုနျပွနျပွောပွရမယျနျော ဟုတျပွီလား။” “အငျးပါ ကိုရဲ.၊ အကုနျပွနျပွောပွမှာပေါ.။ အခုတောငျ ည ဘာဝတျရငျကောငျးမလဲ လှမျးမေးနတောကို၊ မပွောခငျြရငျ ဖုနျးတောငျဆကျမနဘေူး၊ ဒီတိုငျးသှားလိုကျမှာပေါ.” “ဟုတျပါပွီဗြာ၊ ဒါနဲ. ဒီနေ.တနေ.လုံး ဆရာနဲ. ထူးခွားမှုတှရှေိသေးလား ။
ကို.ကိုပွောပွပါအုံး မိနျးမရေ။ ယောကျြား ကွားခငျြလှပွီ။” “အငျး ထူးခွားတာပေါ.။ မနကျ အလုပျတှရှေုပျပွီး နေ.လညျ ခနနားတော. ဆရာရယျလေ သကျမှနျနားရောကျလာပွီး သူ.အခနျးလာခဲ.ဖို.ပွောရငျး ဖငျတုံးလေးကို ညှဈသှားတယျ၊ သိလားကို။ သကျမှနျဖွငျ. လူတှမွေငျကုနျမှာ တှေးပွီး ကွကျသီးတှတေောငျထလို.။ အဲ.ဒါနဲ. သကျမှနျလဲ တှိုငျးလကျသှားပွီး ဆေးကွောသနျ.ရှငျးရေးလုပျပွီး ဆရာ.ဆီထှကျသှားလိုကျတယျ ကို” “ဘာလဲ ဆရာ.ဆီရောကျရငျ အကိုငျခံရမှာ သိနလေို. သနျ.ရှငျးရေးလုပျသှားပေါ.၊ ဟုတျလား သကျမှနျ” “အငျးပေါ. ကိုရဲ.။ အခနျးထဲရောကျတော. ဆရာက လော.ခလြိုကျတဲ.၊ သူမြားတှေ ဝငျလာလိမျ.မယျတဲ.။ သကျမှနျလဲ လော.ခပြွီး ဆရာ.နားသှားလိုကျတော. ဆရာက ထလာပွီး သကျမှနျ ဂြူတီကုတျကို ခြှတျလိုကျတယျ။ အဲ.ဒါကွီးနဲ.ဆို လှဘူးတဲ.။
ဒီတိုငျးလေးကမှ လှတာလို. ပွောပွီး သကျမှနျနို.လေးတှကေို အကြီပျေါကနေ ညှဈပွီး ကိုငျတယျ။ပွီးတော. သကျမှနျကို ဟိုဘကျလှညျ.ပွီး စားပှဲပျေါလကျထောကျလိုကျဆိုလို. သကျမှနျလဲ ဆရာခိုငျးတဲ. အတိုငျး စားပှဲပျေါလကျထောကျပွီး ဖငျလေးကို နောကျပဈထားလိုကျတယျ” “ဖငျလေးက အမိုကျစားလေးပဲ။ ငါ. မိနျးမဖငျထကျ နဲနဲ ပိုကွီးတယျ။ နငျ.ဖငျလေးက ပိုလုံးပိုကောကျတယျ ငါ.မိနျးမထကျ။ နငျ ငါ.မိနျးမကိုသိတယျမလား” “သိတာပေါ. ဆရာရဲ. သူ.အကွောငျး အကုနျသိ။ ဆရာ.မိနျးမနဲ. သကျမှနျနဲ.က တဈဆောငျထဲတဈခနျးထဲ နခေဲ.ကွတာဆရာရဲ.” “အျော ကဲဖျောကဲဖကျတှပေေါ.။ အငျး ငါ.မိနျးမလဲ ငါနဲ. မရခငျက အတျောကဲတာ။ ငါနဲ.ရပွီးမှ ငါ.လကျခကျြမိပွီးမှ ငွိမျသှားတာ။ ငါ.လကျခကျြမိပွီးသှားရငျ တျောရုံလူ မတိုးတော.ဘူး။
နငျလဲ ငါ.လကျစာမိပွီးသှားရငျ ကောငျးမွတျနဲ.ဆို အာသာပွမှောတောငျ မဟုတျတော.ဘူးနျော သိလား” “ရပါတယျ ဆရာ။ အခုတောငျ သမီးယောကျြားနဲ.ဆို မဝတဝဖွဈနတော၊ ဆရာ သမီး ကို သဘောကရြဲ.လားဟငျ ” “ကတြာပေါ. ကလြို.လဲ နငျ.ငါ ချေါတှေ.တာပေါ.”လို.ပွောပွီး သကျမှနျဖငျကို ဆရာ.လကျဝါးကွီးနဲ. ဘယျကော ညာကော ခပျကွမျးကွမျး ရိုကျလိုကျတယျ။ သကျမှနျဖွငျ. နာလညျးနာ ကောငျးလဲကောငျးဖွဈသှားတယျ အကိုရဲ.” “ပွီးတော.မှ သကျမှနျကို ဆှဲထူပွီး ဆရာက နို.လေးကိုကိုငျ ဖငျလေးကိုညှဈပွီး သကျမှနျနှတျခမျးတှနေမျးတယျ အကို။ သကျမှနျဆို လထေဲမွောနသေလိုပဲ ဆရာ.အနမျးမှာ၊ သကျမှနျလြှာလေးကို ဆရာက ဆှဲစုပျလိုကျရငျ တကိုယျလုံးက အားတှအေကုနျ ဆရာ.ဆီ ပါသှားသလိုပဲ နုနျးခြိသှားတယျ”
“ဆရာက သကျမှနျကို ထိနျးထားရငျးနဲ. သကျမှနျထမီကိုခြှတျ အောကျခံဘောငျးဘီထဲ လကျနှိကျပွီး သကျမှနျ ညီမလေးရဲ. အစိလေးကို ပှတျပေးတယျ အကိုရယျ၊ သကျမှနျဘဝမှာ အဲ.လောကျမကောငျးခဲ.ဖူးဘူး။ အစိလေးကို ပှတျပွီး လကျခလယျလေးကိုထိုးထညျ.ပွီး အသှငျးအထုတျကစားလိုကျတာနဲ.တငျ သကျမှနျ တဈခါပွီး သှားတယျ အကိုရေ။” “ကိုယျ.ယောကျြားနဲ. လိုးရငျတောငျ မပွီးတဲ. သကျမှနျလေ ဆရာနဲ.မှ လုပျတောငျ မလုပျလိုကျရဘူး လကျနဲ.တငျကို တဈခါပွီး သှားရတယျ” “ဟီး ဟီး စိတျမဆိုးနဲ.နျော ကို” “ဆိုးပါဘူးဗြာ ကို.မိနျးမလေး ကောငျးနရေငျကို ကိုကကနြေပျနတော” “ပွီးတော.ကော ဘာတှဆေကျဖွဈသေးလဲ” “ပွီးတော. ဆရာ.လီးကွီးကို ကိုငျခိုငျးတယျ အကို”
“ဆရာ.ဟာကွီးက အကွီးကွီးပဲ၊ အကို.ဟာနဲ.ယှဉျကွညျ.ရငျ တခွားဆီပဲ” ကောငျးမွတျတဈယောကျ တဖကျမှ ဖုနျးပွောနရေငျး သူ.မိနျးမကို တခွားယောကျြားတဈယောကျက ပယျပယျနယျအကိုငျခံရတာ၊ ကိုယျ.မိနျးမက ကို.ကို အားမလိုအားမရဖွဈပွီး တခွားတယောကျကို အားရကနြေပျနတော၊ တခွားသူနဲ.ယှဉျပွီး မိမိပစ်စညျးကို သေးတယျလို. အပွောခံရတာတှကွေောငျ. ဖီးအကွီးအကယျြ တကျပွီး လီးတောငျလာတယျ။ သူ.မိနျးမ ပွောတာနားထောငျရငျးနဲ. ဂှငျးတိုကျရတာကို ကွိုကျနတေယျ။ သကျမှနျကလဲ ကောငျးမွတျ အကွိုကျကို သိနသေလိုပဲ အသေးစိတျကို ပွောပွနတေယျ။ “ဆရာ.ဟာကွီးက ၇လကျမလောကျရှိတယျ ဒဈကွီးကလဲ အကွီးကွီးပဲ အရငျးနားကြ နဲနဲသေးသှားတယျ။
အကို.ဟာက သကျမှနျလကျနဲ.တကိုငျစာပဲရှိတယျ။ ဆရာ.ဟာက သကျမှနျလကျနှဈဖကျနဲ.ကိုငျမှ ထိပျကိုဖုံးမိတာ။သကျမှနျလေ ဘယျလိုဖွဈသှားလဲ မသိဘူး ဆရာ.လီးကို ကိုငျကွညျ.မိတာနဲ.တငျ ပါးစပျထဲမှာ ဘယျလိုဖွဈနမှေနျးကိုမသိဘူး အရမျးကိုစုပျခငျြလာတယျ အကိုရဲ.။ ဆရာကလဲ သိနတေယျ။ သကျမှနျအရမျးစုပျခငျြနမှေနျးကို။ အဲ.ဒါ ဆရာက သကျမှနျသဘောဆိုပွီးပွောတော. အကိုရယျ သကျမှနျရယျလေ ဆရာ.လီးထိပျကွီးကို အားရပါးရငုံပွီးတော.ကို စုပျပေးမိတာပဲ” ကောငျးမွတျမှာတော. သကျမှနျ ကိုအောငျမွတျလီးကို စုပျနပေုံကို မကျြစိထဲမွငျရောငျပွီး ဖီးလျအရမျးတကျပွီး ဂှငျးထုနမေိတယျ။ကိုအောငျမွတျရှေ.မှာဒူးထောကျပွီး သူ.မိနျးမကလီးစုပျပေးနတောကို သူကိုယျတိုငျဘေးကနထေိုငျကွညျ.ခငျြစိတျတှဖွေဈနမေိတယျ။
အခုလဲ သကျမှနျပွောတာကို ဆကျနားထောငျနလေိုကျတယျ။သကျမှနျက “ အကိုရယျ၊ ဆရာ.လီးထိပျကွီးကလေ အရမျးကွီးတော. ပါးစပျထဲမှာကို ပွညျ.နတောပဲ။ သကျမှနျလေ အဲ.လောကျကွီးတာကွီး မစုပျပေးဖူးဘူး သိလား အကို။ အကိုခှငျ.လှတျနျော။” “ရပါတယျ မိနျးမရယျ။ မိနျးမကနြေပျတယျမို.လား။ မိနျးမကနြေပျတယျဆိုရငျ ယောကျြားလဲ ကနြေပျတယျ ပွောထားတာပဲကို။ ဟုတျပွီလား မိနျးမ” “အငျးပါ ကိုရဲ.။ ယောကျြားကို ကွိုတောငျးပနျထားတာပါ။သကျမှနျလဲ ဆရာ.လီးကိုစုပျနရေငျးဆရာ.ကို လှမျးကွညျ.တော. ဆရာက သကျမှနျကို သခြောစိုကျကွညျ.နတေယျ ကိုရယျ။
သကျမှနျလဲ ဆရာကနြေပျအောငျ အသအေခြာကို စုပျပေးလိုကျတယျ။ ပွီးတော.လကျတဖကျက ဆရာ.ဥလေး နှဈလုံးကို ဖှဖှလေးကိုငျပွီး ပှတျပေးလိုကျတယျ အကို။ ဆရာ.မကျြနှာမှာ အရမျးကနြေပျတဲ.ပုံလေးဖွဈသှားတယျ အကိုရဲ.။ အဲ.ဒါနဲ. သကျမှနျလဲ ဆရာ.လီးကိုပါးစပျကနထေုတျပွီး ဆရာ. ဥလေးကို တလုံးခငျြးစုပျပေးလိုကျတာပေါ.။ လကျကလဲ ဆရာ.လီးကွီးကို ဂှငျးတိုကျပေးသလို ပှတျပေးလိုကျတယျ။” “ဆရာက သကျမှနျစုပျပေးတာ အရမျးကောငျးတယျဆိုပွီးပွောတော. သကျမှနျလီးစုပျပေးရတာ အရမျးအားရှိသှားတာပေါ.။
ဆရာ.လီးထိပျကွီးကိုစုပျလိုကျ ဥလေးတှစေုပျလိုကျနဲ. လုပျပေးနတေယျ။ ဆရာက တျောတျောကွာတော. သကျမှနျခေါငျးကို လကျနှဈဖကျနဲ.ကိုငျပွီး သကျမှနျပါးစပျထဲ ဆရာ.လီးကွီးကို ထုတျလိုကျသှငျးလိုကျနဲ. လုပျပေးနတေယျ။ သကျမှနျလဲ အသကျကို ခိုးခိုးရှုပွီး ဆရာ.လီးကို စုပျပေးလိုကျတယျ အကို။ ခနလောကျနတေော. ဆရာ.လီးထိပျကနေ လရညျတှပေနျးထှကျကုနျတော.တာပဲ အကိုရယျ။ အရညျတှဆေိုရငျလေ အမြားကွီးပဲ သကျမှနျဖွငျ. မြိုခလြို.ကို မနိုငျဘူး ပါးစောငျကနကေို လြှံထှကျကုနျလို. လကျနဲ.ခံထားရတယျ။” “ ဆရာဆိုရငျလေ သကျမှနျခေါငျးကိုကိုငျပွီး ဆောငျ.ဆောငျ.ထညျ.တာ သကျမှနျဖွငျ. အရမျးကိုကောငျးသှားတာပဲကိုရယျ။ လီးစုပျပေးရငျး ပါးစပျကို အလုပျခံရငျးနဲ. တခါထပျပွီး ပွီးသှားတယျ။ ဆရာ.လရညျတှကေုနျသှားမှ သကျမှနျလဲ ဆရာ.လီးကိုပွောငျနအေောငျ လြှာလေးနဲ.လိုကျယကျပေးလိုကျတယျ အကို။
ပွီးတော.မှ လကျဖဝါးထဲက ဆရာ.လရညျတှကေို ဆရာမွငျအောငျပွပွီး လြှာနဲ.လကျြပွီး သောကျလိုကျတယျ။ ဆရာက ခနနအေုံး ပါးစပျဟဆိုလို. ဟပေးလိုကျတော. ဆရာက သကျမှနျပါးစပျထဲကို တံတှေးတှေ ထှေးထညျ.လိုကျတယျ။ သကျမှနျလီးစုပျတာတျောလို.ဆုခတြာတဲ. အကို။ သကျမှနျဆို အရမျးကိုပြျောသှားတာပေါ.။ သကျမှနျပါးစပျထဲက လရညျတှေ တံတှေးတှကေို သခြောကို အရသာခံပွီးမှ မြိုခလြိုကျတယျ အရမျးအရသာရှိတာပဲ အကိုရယျ။” အဲ.အခြိနျ ကောငျးမွတျမှာ သူ.မိနျးမပွောတာကိုနားထောငျရငျးနဲ. တခြီပွီးသှားပါတော.တယျ။နားထောငျရတာကို ဒီလောကျဖီးလျတကျနရေငျ သခြောသာထိုငျကွညျ.လိုကျရလို.ကတော. ဘယျလိုဖွဈနမေလဲဆိုပွီး စဉျးစားနမေိတယျ။
အဲ.အခြိနျ သူ.မိနျးမသကျမှနျက “ ဆရာ.လီးကိုစုပျပေးပွီးသှားတော. ဆရာကလဲ အဝတျတှပွေနျဝတျ၊ သကျမှနျလဲ အဝတျအစားလေးတှကေိုဆှဲဆနျ. သပျသပျရပျရပျဖွဈအောငျ ပွနျလုပျပွီး ပါးစပျရဆေေးမလို.လုပျတော. ဆရာက ပါးလုပျမကငျြးရဘူးတဲ. အကိုရယျ ဒီတိုငျးနတေဲ.။ အရသာပကျြသှားလိမျ.မယျတဲ. ဒီတိုငျးပဲနလေိုကျပါလို.ပွောတယျ ကို။” အဲ.ဒါနဲ. သကျမှနျလဲ ဒီတိုငျး ပဲနလေိုကျတယျ။ “ ဆရာကိုအောငျမွတျက သကျမှနျကို အထုပျတထုပျပေးလိုကျသေးတယျ အကို။ သကျမှနျလဲ ဖှငျ.မကွညျ.ရသေးဘူး။ အခုကွညျ.လိုကျရမလား။” “အငျး ကွညျ.ကွညျ.လိုကျလေ။ ကိုအောငျမွတျက ဘာတှပေေးလိုကျလဲလို.၊” “အငျး သှားယူလိုကျအုံးမယျ အကိုခနစောငျ.နျော။” “ဟုတျပါပွီမိနျးမရယျ၊ စောငျ.ပါ.မယျ” ခနလောကျကွာတော.မှ သကျမှနျဆီက အံ.သွသံလေးကွားလိုကျရတယျ။
“ဆရာကတော.လေ နိုငျကိုမနိုငျဘူးသိလား။” “ဟငျ ဘာလို.လဲ မိနျးမ” “ ဆရာက သကျမှနျကို လီးတုကွီး ထညျ.ပေးလိုကျတယျ အကိုရဲ.။ဆရာ.ဟာကွီးလောကျရှိတယျ ညိုညိုတုတျတုတျကွီး။ ပွီးတော. အလုံးတှဲလေးတှအေမြားကွီးနဲ. နောကျဆုံးမှာ လကျကိုငျကှငျးလေးလဲပါတယျ အဲ.ဒါက တဈခု၊ နောကျတခုကကတြော. ကီဂယျ လေ.ကငျြ.ခနျးလုပျတဲ. အလုံးလေးနှဈလုံးပါတဲ. အတှဲလေးတဈတှဲ။ နောကျတခုက စတီးနဲ.လုပျထားတဲ. ဖငျထဲထညျ.တဲ. ဟာလေး အကို.လီးလောကျတော.တုတျတယျ အဲ.ဒါလေးရယျ ခြောဆီဘူးလေးတဈဘူးရယျပါတယျ အကို” “အငျး သကျမှနျကို လိုးတော.မလို.နဲ.တူတယျနျော ကိုအောငျမွတျက အဲ.ဒါတှထေညျ.ပေးလိုကျတာ” “အငျး ဟုတျလောကျတယျ အကို၊ ဘယျလိုလုပျရမလဲ အကို။ သကျမှနျ ဆရာကတောငျးခဲ.ရငျ ပေးလိုကျရမလား၊” “မိနျးမသဘောပါပဲဗြာ။ မိနျးမစိတျကွိုကျပါပဲ။ တခုတော.လုပျပေး။
မိနျးမတို.အတူနဖွေဈရငျ ယောကျြားဆီ ဖုနျးဆကျပေး။ အဲ.ဒါလေးတော. ဟုတျပွီလား မိနျးမ” “ဟုတျပါပွီ ကိုရယျ။ ဆရာကသကျမှနျကို လုပျနတေဲ.အခြိနျ အကိုက ဘေးမှာရှိရငျ ပိုကောငျးမယျနျော အကို။” ဘယျသှားကွမှာလဲ သကျမှနျတို.က” “မသိသေးဘူး ကိုရဲ.၊ ဆရာလာချေါမှသိမှာ” “အဲ.ဒါဆို စကပျအကွပျအမဲလေးနဲ. ပငျတီအရာ ထငျးနအေောငျပျေါတဲ. အတှငျးခံလေးနဲ.ဝတျ၊ အပျေါကတြော. ဘလောကျပှပှ ပနျးရောငျနုနုလေးလေ ကိုဝယျပေးထားတဲ.ဟာလေးကို ဘရာမပါပဲ ဝတျသှားလိုကျ” “ဖိနပျကိုတော. ဟိုတခေါကျက သကျမှနျဝယျလာတဲ. ဒေါကျမွငျ. အမဲလေး အဲ.တာလေးစီးသှားလိုကျ၊ အားလုံးဝတျပွီးသှားရငျ ပုံရိုကျပွီး ပို.ပေးလိုကျအုံး ကိုလဲ ကွညျ.ရအောငျ” “ဟုတျပါပွီ ကိုရယျ။ ပို.ပေးလိုကျပါ.မယျ။
ဒီနေ.ည ဘယျသှားတယျ ဘာလုပျတယျဆိုတာကို ဆရာ.ကို ရိုကျခိုငျးပွီး ပို.ပေးလိုကျမယျ နျော အကို။”“ဟုတျပါပွီ မိနျးမရယျ။ ကိုအောငျမွတျကိုပဲ ရိုကျပွီး ပို.ခိုငျးလိုကျပါ။ အကိုကတော. ကိုအောငျမွတျကွီး ငါ.မိနျးမလေးကို ဘယျလိုတှမြေားလုပျနမေလဲလို. တှေးတှေးပွီး ဒီည အိပျပြျောတော.မယျ မထငျဘူး။” “ဟာ အကိုကလဲ အိပျပြျောအောငျတော.အိပျလိုကျပါ နောကျနေ.ကြ သကျမှနျဆီ ဖုနျးဆကျပေါ. သကျမှနျအကုနျပွောပွမှာပေါ. ဆရာနဲ. ဘယျသှားတယျ ဘာလုပျတယျဆိုတာ။ နျော လို.” “ဟုတျပါပွီ မိနျးမရေ။ ဟုတျပါပွီ။
အာ.ဆို ဖုနျးခလြိုကျတော.မယျနျော။ ကို ခုနက ပွောသလိုလေး ဝတျစားပွီး သှားနျော။ ကိုအောငျမွတျကိုလဲ အကိုက အားမနာပါနဲ. စိတျကွိုကျ သုံးဆောငျပါလို. ပွောလိုကျတယျဆိုတာလေးပါ ပွောပေးအုံးနျော မိနျးမ။” “ဟုတျပါပွီတဲ.ရှငျ၊ ဒါပဲနျော ယောကျြား” ကောငျးမွတျလဲ သကျမှနျနဲ. ဖုနျးပွောအပွီး သူ.မိနျးမကို ကိုအောငျမွတျကွီးက ဘယျလိုမြား လုပျလိုကျလမေလဲ တှေးရငျး နောကျနေ.ကိုသာ မွနျမွနျရောကျခငျြနမေိတော.တယျ။ အလုပျထဲမှာ လုပျနရေတာလဲ စိတျထဲ ဘာလိုနမှေနျးမသိ စိတျရှုပျနပွေီး အလုပျမွနျမွနျသိမျးကာ အဆောငျကို ပွနျလာလိုကျတော.တယျ။ သကျမှနျကတော. ကောငျးမွတျပွောတဲ.အတိုငျး စကပျအကွပျမဲမဲလေးနဲ. ပနျးရောငျနုနုဘလောကျလေးကို ဝတျပွီး ဆရာ.လာအချေါကို စောငျ.နလေိုကျတယျ။
သိပျမကွာပါဘူး ဆရာ.ကားလေး ခွံထဲ မောငျးဝငျလာတာတှေ.လိုကျရတယျ။ သကျမှနျလဲ အိမျပျေါကနေ အပွေးလေး ဆငျးလာပွီး ကိုအောငျမွတျကို ထှကျကွိုတာပေါ.။ “ အမလေး ဖွေးဖွေးလာလဲ ရပါတယျ သကျရယျ။ အကိုက ဘယျမှ ထှကျမပွေးပါဘူး။ အကုနျလုံးလဲ ပွုတျပကျြထှကျပါအုံးမယျ။” “ဆရာ.ကိုမြှျောနတော သကျမှနျက။ ဆရာ.ကားလေးဝငျလာတာတှေ.တော. ဝမျးသာအားရနဲ. ပွေးဆငျးလာတာပါ ဆရာ။ သကျမှနျ ဝတျထားတာ လှရဲ.လား ဆရာ။ အဲ.တာ သကျမှနျယောကျြားကိုတိုငျ ဝတျခိုငျးထားတာ ဆရာရဲ.။” “ဟာ ကောငျးမွတျကိုတိုငျ ဝတျခိုငျးထားတာဆိုရငျ အရမျးလှတာပေါ.။ ဒီည ကိုနဲ. သှားမယျဆိုတာရော ပွောပွလိုကျသေးလား။” “ဟုတျကဲ. ဆရာ။ ပွောပွလိုကျတယျ သူ.ကို။ သူက ဆရာ.ကို မှာလိုကျသေးတယျ။ သူပေးလိုကျတာကို ဆရာက စိတျကွိုကျသုံးဆောငျပါတဲ.၊ သူကနြေပျပါတယျတဲ. ဆရာရေ။
သကျမှနျကတော. သူကနြေပျနပျမနပျနပျ ဆရာကနြေပျရငျကို သကျမှနျက သဘောကနြတောပါဆရာ။” “ဟုတျပါပွီ သကျမှနျရယျ” ကိုအောငျမွတျလဲ အိမျထဲ ဝငျပွီး အိမျတခါးကို အသာပိတျလိုကျကာ သကျမှနျကို နှတျခမျးခငျြး တေ.နမျးလိုကျပါတယျ။ ပွီးတော. သကျမှနျရငျသားလေးတှကေိုလဲ အကြီပျောကနေ အသာ ပှတျသတျပေးပွီး လကျတဖကျက သကျမှနျ ဖငျကို အားရပါးရ ညှဈပေးလိုကျတော. သကျမှနျတယောကျ ခါးလေးကိုကော.တကျပွီး ကိုအောငျမွတျ လညျပငျးကို သိုငျးဖကျကာ ကိုအောငျမွတျရဲ. လြှာလေးကို အားရပါးရ စှဲစုပျနမေိတယျ။ကိုအောငျမွတျက စကပျလေးကို အသာခြှတျလိုကျပွီး အတှငျးခံထဲလကျထညျ.ကာ သကျမှနျ ဖငျအဝလေးကို လကျညှိုးလေးနဲ.ထိုးကလိနလေိုကျတယျ။ သကျမှနျလဲ ဖငျအဝကို ကလိခံရတော. ရငျဘတျထဲ လှိုကျလှိုကျတကျလာတယျ။ ကိုအောငျမွတျကိုလဲ ပိုပွီး ဖကျထားမိတယျ။ခနလောကျနတေော.မှ ကိုအောငျမွတျက အနမျးခွှနေရောကနေ ခှာပွီး သကျမှနျကို သူပေးထားတဲ. ပစ်စညျးလေးတှကေို သှားယူခိုငျးလိုကျတယျ။
သကျမှနျက ကိုအောငျမွတျလကျကို ဆှဲပွီး “ဆရာပါလိုကျခဲ.” ဆိုပွီး ကိုအောငျမွတျကိုပါ သူတို.လငျမယားအိပျခနျးကို ချေါသှားတယျ။ သကျမှနျရဲ. စကပျမပါတော.တဲ. ဖငျလေးကို ကွညျ.ရငျး ကိုအောငျမွတျလဲ သကျမှနျချေါရာလိုကျသှားတာပေါ.။ အိပျခနျးထဲရောကျတော. ကိုအောငျမွတျက သကျမှနျကို အသာဆှဲလှညျ.ပွီး ပခုံးကို အသာဖိခပြွီး သူ.ရှေ.မှာ ဒူးထောကျထိုငျခိုငျးလိုကျတယျ။ သကျမှနျကလညျး ကိုအောငျမွတျကို မကျြစောငျးလေးတခကျြထိုးကွညျ.ပွီး ကိုအောငျမွတျရဲ. ဘောငျးဘီဇဈကို ဖွုတျလိုကျပွီး သိပျမတောငျသေးတဲ. လီးကိုထုတျပွီး အားရပါးရ စုပျပေးလိုကျတယျ။ “ကောငျးလိုကျတာ သကျမှနျရယျ။ သကျမှနျတို.လငျမယား အိပျခနျးထဲမှာ သကျမှနျကို လီးစုပျခိုငျးရတာ ရှယျပဲသကျရယျ။” သကျမှနျလဲ ကိုအောငျမွတျလီးစုပျနရေငျးနဲ. သူ.ယောကျြားမှာတာသတိရသှားတယျ။ ပါးစပျထဲကလီးကို ထုတျပွီး ကိုအောငျမွတျကို ပွောလိုကျတယျ။
“ ကောငျးမွတျကို ပွဖို. သကျ အကို.လီးစုပျနတောကို ဗီဒီယိုဖွဈဖွဈ ဓါတျပုံဖွဈဖွဈ ရိုကျပေးပါလား အကို” “ဟာ ဟုတျတာပေါ. အဲ.ကောငျကို ပွရမယျ။ အဲ.ကောငျ သူတို.အိပျခနျးထဲမှာ သူ.မိနျးမ ဘယျလောကျတောငျ ရှထပွီး ငါ.လီးကို အငမျးမရစုပျနလေဲဆိုတာ ပွရမယျ။ သကျကလဲ ကို.လီးကို စိတျကွိုကျ စုပျနေ ကွားလား ” ဆိုပွီး ကိုအောငျမွတျက သကျမှနျပါးလေးကို ခပျစပျစပျ ရိုကျလိုကျပွီး ပွောလိုကျတယျ။ ပွီးတော. ဖုနျးထုတျပွီး ကငျမရာဖှငျ.ကာ ဗီဒီယို ရိုကျနလေိုကျတယျ။ သကျမှနျလဲ သူ.ယောကျြားကို ပွဖို. ကငျမရာနဲ. ရိုကျနတောကို သိတော. ခုနကလီးစုပျတာထကျပိုပွီး ရမကျပွငျးပွငျးနဲ. ကိုအောငျမွတျလီးကို စုပျပါတော.တယျ။ လီးကို စုပျနရေငျးနဲ. ဘောလေးတှပေါ တဈလုံးခငျြး ငုံငုံပွီး အားရပါးရစုပျပေးတော. ကိုအောငျမွတျတောငျ ကောငျးလှနျးလို. ညညျးသံတှပေါ ထှကျလာတယျ။ “ အားပါး စုပျစမျး သကျမှနျ စုပျစမျး။ နငျ.လငျလီးကို စုပျရတာနဲ. ငါ.လီး စုပျရတာ ဘယျလီးကစုပျလို.ပိုကောငျးလဲ ပွောစမျး ကောငျမ။ အားပါး စုပျစမျး ငါ.ဘောတှပေါ စုပျစမျး။ ကောငျးလိုကျတာကှာ နငျ.ပါးစပျကို ငါပိုငျသှားပွီ နောကျနောငျ နငျ.လငျလီးကို စုပျခငျြရငျတောငျ ငါ.ဆီက ခှငျ.တောငျးရမယျ ကွားလားကောငျမ” လို.ပွောပွောပွီး သကျမှနျဆံပငျတှကေို စုဆှဲပွီး ခါးကိုကော.ကာ ပါးစပျထဲ လီးထိုးထညျ.ကာ လိုးပါတော.တယျ။
“ အကို.လီးက စုပျလို.ပိုကောငျးတယျ အကို။ ဟိုကောငျ ကောငျးမွတျလီးက အကို.လီးတဝကျတောငျ ရှိတာမဟုတျဘူး ဒါကွီးကမှ စုပျရတာ အားရတာ။ အားပါး ကောငျးလိုကျတာ အကိုရယျ။ အကို.ဘောတှကေ နှေးနှေးလေး စုပျလို. ကောငျးလိုကျတာ။ ဟုတျကဲ. ခှငျ.တောငျးပါ.မယျ အကို။ ကွားလား ကောငျးမွတျ နောကျ လီးစုပျခံခငျြရငျ အကိုဆရာ ကိုအောငျမွတျဆီ ခှငျ.တောငျးပွီး မှ သကျမှနျကို လီးစုပျခိုငျးနျော သကျမှနျကတော. အကိုအောငျမွတျက ခှငျ.မပွုရငျ ရှငျ.လီးကို ယောငျလို.တောငျ လကျနဲ.မထိဘူးကွားတယျနျော” ဆိုပွီး ကငျမရာကို ကွညျ.ကာပွောရငျး လီးဆကျစုပျပါတော.တယျ။ အဲ.နောကျ ကိုအောငျမွတျက ပါးစပျကို လိုးတော. စကားပွောလို.မရတော.ဘဲ လညျခြောငျးထဲထိ လီးကိုရောကျအောငျ အသာဟကာ ပါးစပျလိုးတာကို အားရပါးရ ခံနပေါတော.တယျ။ ပွီးပါပွီ။
ကျတော်က ဆရာဝန်တစ်ယောက်ပါ။ နံမည်ကတော. အောင်မြတ်ပါ။ စစ်တပ်ကနေ ပြောင်းလာတဲ. ဆရာဝန်ကြီးပေါ.ဗျာ။ အသက်ကတော. ၃၅ နှစ်ဗျ။ မိန်းမလား ရှိတာပေါ.၊ အသက် ၂၅နှစ်အရွယ် ဆရာဝန်မလေးပေါ.ဗျာ။ ကျတော်လား သူ.အရင် အများကြီး ထားခဲ.ဖူးတာပေါ. မယူတာပဲရှိတယ်။ လူကောင်ထွားထွား အရပ်က ၅ပေ၁၁လက်မ၊ ပောင်ချိန် ၁၆၀ ဆိုတော. လူကောင်ကြီးကြီး ဟိုဒင်းလဲ ကြီးကြီးပေါ.ဗျာ။ စော်တွေဆို ဘယ်တွေ.မရှောင်ပဲ အပျိုကော အအိုကော လင်ရှိတာကော တခုလပ်ကော ဘာမှ မရှောင်ဘူး တွေ.မရှောင်ပေါ.ဗျာ။ လူပျိုပေါက်ဘဝထဲက အတွေ.အကြုံတွေရှိလာတော. ဆရာဝန်လဲ ဖြစ်ကော ဘာပြောကောင်းမလဲ လိမ်.လို. သိပ်ကောင်းပေါ.ဗျာ။ အခုပြောမှာက ကျတော်နဲ. မန်းတလေးမှာ တွေ.ကြုံခဲ.ရတဲ. အဖြစ်အပျက်ကိုဗျ။
ကျတော.မိန်းမက နေပြည်တော်မှာ တာဝန်ကျတယ် ကျတော်ကတော. မန်းလေးမှာပေါ.။ တရက် နေပြည်တော်ကနေ မိန်းမနဲ. တွေ.ပြီး အပြန် လိုင်းကားပေါ်မှာ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ရခဲ.တယ်။ အဲ.ညီလေးနာမည်က ကောင်းမြတ်။ သူ.အသက်က ၂၈နှစ် ရှိပြီ။ လူကောင်ကပိန်ပိန်သွယ်သွယ် စကားပြောရည်မွန်တယ်။သူကလဲ အိမ်ထောင်ကျပြီးသား နေပြည်တော်ကို အလုပ်နဲ.လာတာ။ အိမ်ထောင်ကျပြီးမှ ပိုပြီး အလုပ်တွေရလာလို. နယ်ပဲ တောက်လျောက် ထွက်နေရတာ။ တခါတလေမှပဲ အိမ်မှာ ၃၊၄ရက်နေနိုင်တယ်တဲ.။ ကိုတွေနဲ. ဘဝတူတွေဆိုတော. လမ်းမှာ စကားပြောလာတာပေါ.။ သူ.မိန်းမက ဆရာဝန်ပေါက်စတဲ.။
နာမည်က သက်မွန်တဲ.။ အခု==ဆေးရုံမှာ တာဝန်ကျတယ်တဲ.။ သူ.မိန်းမက အရမ်းချောတယ်၊ အရမ်းလဲ ချစ်ဖို.ကောင်းတယ်၊ အရမ်းလဲချစ်တယ်တဲ.။အဲ.လိုပြောပြီး ဖုန်းလေးနဲ. သူတို.မင်္ဂလာဆောင်တုန်းကပုံလေးကို ပြတယ်။ သေချာသွားပြီ ကျတော.လက်အောက်မှာ တာဝန်ကျတဲ. ဆရာဝန်မလေးဆိုတာ။ အစက နာမည်ပဲ တူတယ် အောက်မေ.နေတာ။ ယောက်ျားသားချင်း စကားပြောနေရင်း အိမ်ထောင်ရေး အဆင်ပြေလားဆိုပြီး အိမ်ထောင်ရေးအကြောင်းရောက်သွားတော. ကျတော်တို. လင်မယားကတော. အဆင်ပြေတယ်ညီရေ။နားလည်မှုတွေယူထားကြတယ်။ ညီတို.ကော အဆင်ပြေရဲ.လား။ ကိုယ်တို.က တယောက်တနယ်ဆီနေကြတာဆိုတော. ဒီလိုညှိနှိုင်းထားမှ အဆင်ပြေတာ ဆိုတော. ကျတော်ကတော. ပြေပါတယ်ဗျာ။ မိန်းမသာ ပြေမပြေ မသိတာ ကျတော.မိန်းမ သက်မွန်တယောက် နေလို.ထိုင်လို.ကောင်းပါ.မလားမသိဘူး။ ကျတော်က အမြဲ ခရီးထွက် ပြန်ရောက်တော.လဲ ပင်ပန်းပြီး တန်းအိပ်နဲ. မင်္ဂလာဆောင်ထားတဲ. ၂ နှစ်အတွင်း သိပ်တောင် မိန်းမနဲ. မနေဖြစ်ပါဘူးအကိုရယ်။
ကြာတော. သက်မွန်ကိုတောင် အားနာမိတယ်။ အဲ.တာဆို ဘယ်အဆင်ပြေမလဲညီရဲ. တကိုယ်ကောင်းဆန်သလိုဖြစ်နေမှာပေါ. ညီကတော. ကောင်းပြီး သူ.ကျမှ လိုအပ်နေတယ်ဆိုတော.။ ကျတော်လဲ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ မသိတော.ပါဘူးဗျာ။အခုလဲ ဆေးရုံမှာ နေရင်း သူတို.ထဲက သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ယောက်နဲ. ဖြစ်သွားရင်တောင် ကောင်းမယ်လို. တစ်ခါတစ်ခါတွေးမိတယ် ချစ်တဲ.ကြိုက်တဲ. အထိတော. မဟုတ်ဘူးပေါ. အကိုရယ်။ အာသာပြေရုံလောက်တော. ခွင်.လွှတ်ပေးနိုင်မလားလို. ကိုယ်.ကိုကိုယ်ပြန်မေးနေမိတယ်ဗျာ။ အရမ်းချစ်တော. သူစိတ်ကျေနပ်သွားရင်ကို ကျေနပ်နေတော. ခွင်.ပြုနိုင်မယ်ထင်တာပဲဗျာ။ ကျတော.မိန်းမတော. မသိသေးပါဘူး။ ပြောလဲ မပြောရဲဘူး။ ဒါပေမယ်. သူစိတ်ပါလို. လုပ်လိုက်လဲ ကျတော်သူ.ကို အပြစ်မတင်ရက်ပါဘူးလေ အကိုရယ်။ ဒါနဲ.ပဲ ကျတော်လဲ ကောင်းမြတ်ကို အကြံညာဏ်တွေပေးလိုက်တယ် ဘယ်လိုပြော ဘယ်လိုလုပ်ဆိုပြီးတော.ပေါ.။ လိုအပ်ရင် ဖုန်းဆက်ဆိုပြီး ကျတော.ဖုန်းနံပါတ်လဲပြော သူ.ဖုန်းနံပါတ်လဲ တောင်းလိုက်တယ်။ ကျတော်ကတော.တွေးနေပြီ သက်မွန်ကို ဘယ်လိုဖန်ရမလဲဆိုတာ။ဟီးဟီး။ ဒီလိုနဲ. ကောင်းမြတ်တစ်ယောက် အိမ်ပြန်ရောက်တော. သူ.မိန်းမက ရေချိုးခန်းထဲမှာ ရေချိုးနေတယ်။
သူလဲ ပင်ပန်းလာတာနဲ. ခနနား ရေချိုးမယ်ဆိုပြီး စောင်.နေတယ်။ သက်မွန်တစ်ယောက်ရေချိုးတာ ကြာလို. ရေချိုးခန်းကို သွားကြည်.တော. တံခါးပိတ်ထားလို. တံခါးခေါက်မလို.လုပ်တုန်း အထဲက အသံတွေကြားလိုက်ရတယ်။ သက်မွန်တစ်ယောက် ဖီးတွေတက်နေတဲ. အသံလို.ထင်ရတဲ. အသံတွေ ကြားလိုက်ရတယ်။ ဒါနဲ. သူ.မိန်းမသူ ပြန်ချောင်းဖို. လုပ်ရတော.တာပေါ.။ရှာရင်းနဲ. ရေချိုးခန်း အနံ.ထုတ်ပန်ကာပေါက်ကိုတွေ.သွားတော. ခုန်တစ်ခုနဲ. ခုပြီး တက်ကြည်.လိုက်တယ်။ ပန်ကာက ဖုန်တွေတက်သံချေးကိုက်လို. မလည်တော.တာကြာနေပြီဆိုတော. ကွက်တိပဲ။ ကောင်းမြတ်တစ်ယောက် သူ.မိန်းမကို သူပြန်ချောင်းရတာကို အတော် ရင်ခုန်နေတယ်။ သူ.မိန်းမ ဘာတွေလုပ်နေလဲပေါ.။ ရေချိုးခန်းထဲမှာ သက်မွန်တစ်ယောက် သူ.စောက်ဖုတ်လေးကို ဖြဲပြီး အစိလေးကို လက်လေးနဲ. ပွတ်ပေးနေတယ်။ ကောင်းလိုက်တာကိုရယ်။ ကောင်းလိုက်တာ အရမ်းကောင်းတယ် ညီမကို အဲ.လိုလေးပွတ်ပေးတာ ကောင်းလိုက်တာ။ကိုကိုစိုးပွတ်ပေးတာ အရမ်းကောင်းတာပဲ သက်မွန် အရမ်းကြိုက်တယ်။
အစိလေးကိုနာနာလေးပွတ်ပေးပါ ဆိုပြီး ပြောပြောပြီးစောက်စိလေးကိုပွတ် နို.လေးကိုညှစ်လိုက် လုပ်နေတယ်ဗျာ ကောင်းမြတ်တစ်ယောက် ရင်တွေခုန်နေတယ်။ ခုနပြောသွားတဲ.ထဲ ကိုကိုစိုးလို. ပါလာတော. ဒါ သူ.နာမည်မဟုတ်ဘူး ဘယ်သူ.နာမည်လဲမသိဘူး။ သက်မွန် အရင်ရိးစားနံမည်လားဘာလဲပေါ.။ဒါပေမယ်. အဲ.လို တခြားသူကို မှန်းပြီး ဖီးလ်တက်နေတဲ. သူ.မိန်းမကို မြင်ရတာကိုက ကောင်းမြတ်အတွက်တော. တကယ်.ကို ကျေနပ်စရာကြီးပေါ. စိတ်ထဲမှာ သူ.ကိုမတောင်.တပဲ တခြားတစ်ယောက်ကို တမ်းတနေတာတွေ.တော. စိတ်ထဲမှာ နေလို.မကောင်းပေမယ်. သူ.မိန်းမ တခြားတစ်ယောက်ကို တမ်းတပြီး ကျေနပ်ပြီး ကောင်းနေတာတွေ.တော. ကောင်းမြတ်လဲ အလွန်ကျေနပ်နေမိတယ်။ ဒါ လမ်းမှာ တွေ.တုန်းက အကို ကိုအောင်မြတ်ပြောလိုက်သလို ကပ်ကိုးဖီလင်ဆိုတာများလား။
ဖြစ်နိုင်တယ် သူ.မိန်းမကို တခြားတစ်ယောက်က စိုက်ကြည်.နေရင် သူကျေနပ်တယ်။ သူ.မိန်းမ မြန်မာဝတ်စုံ ကပ်ကပ်ရပ်ရပ်လေးတွေဝတ်လိုက်ရင် ခန္ဒာကိုယ်ကို ထင်းထင်းရင်းဖြစ်နေတာကို တခြားယောက်ျားသားတွေကြည်.ရင် သူကျေနပ်နေတာတွေက ကပ်ကိုးရဲ. အစဖြစ်နိုင်တယ်။ အခုလဲ သူ.မိန်းမ သက်မွန်တစ်ယောက် တခြားယောက်ျားတစ်ယောက်နံမည်ကို ရွတ်ပြီး ဖီးတက်နေတာကြည်.ရင်း သူလဲ ဖီးတွေတက်လာတယ် အဲ.ဒီလိုမျိုးကို ပိုကြိုက်မိနေတယ်။ သူဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ ခနနေတော. သက်မွန်ရေချိုးပြီး ထွက်လာတော. ကောင်းမြတ်က အိပ်ယာပော်မှာ အိပ်ပျော်နေတယ်။ သက်မွန်လဲ အဝတ်အစားလဲပြီး သူ.ယောက်ျားကောင်းမြတ်ကို နှိုးလိုက်တယ်။ အဲ.ကျမှ ကောင်းမြတ်က အိပ်ယာကနေ လူးလဲထပြီး ညစာသွားစားဖို.ပြောတယ် ဒီနေ. ညစာအပြင်ထွက်စားရအောင်လို.။
မိန်းမကို ဒီအဝတ်တွေ မဝတ်နဲ. ဒီည မိန်းမအတွက် ကိုယ်ရွေးထားတယ် ဒါလေးတွေဝတ်ဆိုပြီး အဝတ်တွေထုတ်ပေးတော. သက်မွန်က ဒါတွေ တကယ်ဝတ်ရမှာလား အင်းပေါ. သက်မွန်ရဲ. ဝတ်ရမှာပေါ. လို.ပြောတော. သက်မွန်က ဝမ်းသာသွားတဲ. မျက်နှာလေးနဲ. အဝတ်တွေသွားလဲလိုက်တယ် ကျတော်လဲ ရေချိုးခန်းထဲ ဝင်ပြီး ရေချိုးပြီး ထွက်လာတော. သက်မွန်လေ အရမ်းကို ဆက်ဆီကျပြီး လှပနေတယ် စကပ်အတို အကြပ် အင်္ကျီအကြပ် အတွင်းခံဘော်လီက ပါးပါးနဲ.ဆိုတော. နို.သီးခေါင်းလေးတွေက ထင်းလို. အောက်ခံဘောင်းဘီကလဲ ဂျီစတင်းဆိုတော. ကြိုးလိုင်းလေးတွေထင်း ဖင်သားအလုံးလိုက်ထွက်နေတော. အရမ်းကို ဆက်ဆီဖြစ်နေတယ်။ သက်မွန်ကော ကြိုက်ရဲ.လား ကိုယ်ဝတ်ခိုင်းတာလေးတွေကို။ ကြိုက်တာပေါ. ကိုရဲ. ကိုမကြိုက်မှာဆိုးလို. သက်မွန်က ထုတ်မဝတ်တာ။ အမြဲတမ်းဂျူတီကုတ်ကြိးနဲ. နေနေရတော. မွန်းကြပ်နေတာ တခါတလေ ဒီလို ပေါ.ပေါ.ပါးပါး လွတ်လွတ်လပ်လပ် လေး စိတ်ကြိုက် ဝတ်ချင်တာပေါ.။
ကိုကကော ကို.မိန်းမ ဒီလို ဝတ်တော. တခြားယောက်ျားသားတွေ ကြည်.ပြီး ငမ်းမှာကို ဘယ်.နှဲ.မှ မနေဘူးလား။မနေပါဘူး ကို.မိန်းမက ပစ္စည်းရှိလူတန်းစားမို. ကြည်.တာ ကြည်.ပါစေပေါ. သူတို.လဲ ဘာမှမှလုပ်လို.မရတာ သူတို.အဲ.လို ကြည်.လေ ကိုပိုပြီး အားရှိလေပေါ. အရမ်းလှတဲ. သူလေးကို ပိုင်ဆိုင်ခွင်.ရထားလို.။ ဟုတ်ပါပြီ ကိုရယ်။ သက်မွန်က ကိုမကြိုက်မှာ စိုးလို.ပါ။ ကိုကကြိုက်တယ်ဆိုတော. နောက်လဲ သက်မွန် ဒီလိုမျိုးဝတ်မယ်နော်ကို။ ဝတ်ပါဗျာ ဝတ်ပါ၊ ကို မန်းလေးမှာ မရှိတဲ.နေ. ဝတ်မယ်ဆိုရင် ကို.ကို ဓါတ်ပုံလေးတော. ရိုက်ပို.ပေး။ ကိုလဲ ကို.မိန်းမ အလှကို ကြည်.ပြီး အားရပါးရမှန်းရအောင်လို.။ ဟုတ်ပါပြီ ကိုရယ် သက်မွန် အဲ.လိုဝတ်ရင် ကို.ကို ဓါတ်ပုံရိုက်ပို.ပေးမယ်။
ဘယ်သွားမယ် ဘာလုပ်မယ်ဆိုတာက အစ ပြောပြမယ် ။ ကိုက မချုပ်ချယ် မတားဆီးရဘူးနော်။ အင်းပါကွာ။ လာသွားကြမယ်။အဲ.ဒါနဲ. ကျတော်တို.လင်မယားလဲ ၇၃လမ်းက mingalar Mandalay အိုးရှင်းကို ထွက်လာခဲ.လိုက်တယ်။ ဒီနေ.က ရုံးပိတ်ရက်ဆိုတော. အဲ.မှာ လူရှုပ်မယ်ဆိုတာသိလို. တမင် ထွက်လာခဲ.လိုက်တယ်။ လမ်းလျောက်ဈေးဆိုတော.လမ်းလျောက်ပြီး လျောက်သွားကြည်.တာပေါ.။ လမ်းပေါ်က ဘဲတွေဆို ကျတော.မိန်းမ သက်မွန်ကို မြင်တာနဲ. တင် ငမ်းတော.တာ အကြီးအကျယ်ပဲ တချို.ဘဲတွေဆို ကျတော်တို.နောက်ကနေကို လိုက်ရှိုးတာဗျာ။
မိန်းမက ကျတော.ကို ငဲ.ကြည်.ငဲကြည်.နဲ. ကို အဆင်ပြေရဲ.လားတဲ. သူများတွေ လိုက်ကြည်.နေတယ်တဲ. ။ ကျတော်ကလဲ သက်မွန် ကြိုက်တယ်မို.လားဆိုတော. ကြိုက်တယ်တဲ.။ ကိုလဲကြိုက်တယ် အဲ.လို ကြည်.ခံရတာ ဘယ်လိုနေလဲဆိုတော. တမျိုးပဲ အရမ်းကောင်းတယ်။ညီမလေးထဲမှာတောင် လှိုက်ယားလာတယ်။ ဒါဆို ညကျ ရှယ်ပြူစုပေးရမယ်ပေါ. ဆိုတော.။ အင်းပေါ.ကိုရဲ. ကိုကရှယ်ပြုစုပေးမှရမှာပေါ. သက်မွန်မှာ ပြုစုပေးမယ်.လူဆိုလို. ကိုပဲရှိတာကို။ဒီလိုနဲ.လျေက်သွားကြည်.ရင်းနဲ. အိုးရှင်းပေါ်တက်ပြီး YKKOမှာ ကြေးအိုးသွားစားကြတယ်။ ပြီးတော. သက်မွန်က တွိုင်းလက်သွားချင်တယ်ဆိုလို.လိုက်ပို.လိုက်တယ်။ ကျတော်လဲ တွိုင်းလက်ထဲ ခနသွားလိုက်တယ်။ ကျတော်ပြန်ထွက်လာတော. သက်မွန်ကို မတွေ.တော.ဘူး အဲ.ဒါနဲ. လိုက်ရှာတော. အပြင်မှာ ယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ. စကားပြောနေတာတွေ.လိုက်တယ်။
အနားရောက်မှ အံ.သြသွားတယ်။ ကျတော်နဲ. လမ်းမှာ တွေ.ခဲ.တဲ. သူ ကိုအောင်မြတ်။ သူက ကျတော.မိန်းမနဲ. စကားလက်ဆုံကျနေတယ်ဗျာ။အဝေးကနေသူတို.နှစ်ယောက်ကိုကြည်.ရင်း ထောင်ထောင်မောင်းမောင်း ယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ. လူကောင်သေးသေး ကျတော.မိန်းမကို အဲ.လိုမြင်လိုက်ရတော. ကျတော.စိတ်ထဲ တမျိုးကြီးဗျာ ဘယ်လိုဖြစ်သွားမှန်းတော. မသိဘူး ဒါပေမယ်.ကျေနပ်မှုလေးတော. ဖြစ်သွားတယ်။ သက်မွန်က ကျတော.ကို မြင်တော. လှမ်းပြီး လက်ပြတယ်။ ကျတော်လဲ ခပ်သွက်သွက်လျောက်လာပြီး အနားရောက်တော. သက်မွန်က ကျတော.ကို မိတ်ဆက်ပေးတယ်။
ဒါ သူရဲ. ဆရာ ဆရာ ဦးအောင်မြတ်တဲ. အခုမှ ပြောင်းလာတာ သိပ်မကြာသေးဘူးတဲ. ဆရာ. အမျိုးသမီးကလဲ အရမ်းချောတာတဲ. ဆရာ.အမျိုးသမီးကတော. နေပြည်တော်မှာသက်မွန်ထက် တတန်းကြီးတယ် သူလဲ ဆရာဝန်ပဲလို. မိတ်ဆက်ပေးတော. ကိုအောင်မြတ်က တွေ.ရတာ ဝမ်းသာပါတယ် ကိုကောင်းမြတ်ရေဆိုတော.။ သက်မွန်က ဟင် ကိုနဲ.ဆရာနဲ.က သိနေတာပေါ. ဆိုတော. လမ်းမှာ ကားစီးရင်းနဲ. တွေကြတာပါလို. ကိုအောင်မြတ်က သက်မွန်ကို ပြန်ဖြေပေးရင်း ခေါင်းလေးကို ပုတ်လိုက်တယ်။ကျတော်က ကိုအောင်မြတ်ကို လှမ်းကြည်.တော. သူက ခင်များရရဲ.လားဆိုတဲ.အထှာနဲ. ပြန်ကြည်.တယ်။ ကျတော်က သက်မွန်မမြင်အောင် လက်မထောင်ပြလိုက်တော. ကိုအောင်မြတ်က အိုကေတဲ.။
ဒီလိုနဲ. သက်မွန်က အလယ်က ကျတော်နဲ. ကိုအောင်မြတ်နဲ.က ဘေးနှစ်ဘက်ကနေ လျောက်လာနေတုန်း ကောင်မလေးတစ်သိုက်က ကျတော်နဲ. သက်မွန်ကြား အတင်းတိုးဝင်တော. ကျတော်က ဘေးရောက်သွားတယ် သက်မွန်က နဲနဲယိုင်သွားတော. ကိုအောင်မြတ်က သက်မွန် ခါးလေးကို ကိုင်ပြီး ထိန်းထားတယ်။ သက်မွန်က သတိမထားမိတာလားဘာလားမသိဘူး ဘာမှ ပြန်မပြောဘူး။ကျတော.ဘေးလဲ ပြန်ကပ်မလာဘူး။ မသိရင် သူတို.နှစ်ယောက်ကပဲ လင်မယားအတွဲ ကိုက သူငယ်ချင်းလို ဖြစ်နေတယ်ဗျာ။ ကိုအောင်မြတ်က အတော်ဆိုးတဲ.လူ ကျတော်.ကိုလှည်.ကြည်.ပြီး ကျတော.မိန်းမ တင်ပါးလေးကို ခပ်ပါးပါးလေးပုတ်ပြတယ်ဗျာ ကျတော်.ရင်ထဲမှာ တဒိန်းဒိန်းနဲ. အရမ်းသဘောကျပြီး ကိုအောင်မြတ်ကို ပြုံးပြလိုက်တယ် ။ သက်မွန်ကတော. သူ.ဘေးနားကလူကို သူ.ယောက်ျားများထင်နေလားမသိဘူး ဘာမှကို ပြန်မပြောတာ။
အဲ.လိုနဲ. ရှိုးပွဲရှေ.ရောက်တော. ကိုအောင်မြတ်က သက်မွန်ကို ရှေ.နားရောက်အောင် တိုးရင်းတိုးရင်းနဲ. ခေါ်သွားတော. ရှေ.အတော်ရောက်သွားတယ် ကျတော်ကတော. နောက်နားမှာ ကျန်နေခဲ.တာပေါ.ဗျာ။ ကျတော်က ရှိုးပွဲမှာ ဘယ်သူဆိုနေလဲ ဆိုတာတောင် အာရုံမရတော.ပါဘူးဗျာ။ ရှေ.က ကျတော.မိန်းမ သက်မွန်နဲ. သူ.ဆရာ ကိုအောင်မြတ်တို.ကိုပဲ လိုက်ကြည်.နေမိတယ်။ ကျတော်ကလဲ ခွင်.ပေးထားတယ်ဆိုတော. ကိုအောင်မြတ်က ကျတော်မြင်သာအောင်ကို သက်မွန်ဖင်သားလေးတွေကို ကိုင်တော.တာဗျို. ပြီးတော. သက်မွန်ကိုလဲ ဒီနားတိုးဆိုးပြီး သူ.ရင်ခွင်ထဲ ဆွဲထည်.ထားသေးတယ်။ မိန်းမကတော. သူ.ယောက်ျား တစ်ယောက်လုံး ပါလာတာကို မေ.နေလားမသိဘူး ။ ခနလောက်နေတော. ကိုအောင်မြတ်က သက်မွန်ကို သူ.ရှေ.လာခဲ.ဆိုပြီး ရှေ.ကိုပို.လိုက်တယ် သူကတော. နောက်ကနေ သက်မွန်ကိုသိုင်းဖက်ထားတယ် ဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာတော. ကျတော်လဲ မမြင်လိုက်ရဘူး။ ဒါပေမယ်. အဲ.လို ကို.ရှေ.မှာပဲ ကို.ရဲ.မိန်းမကို တခြားတစ်ယောက်က ကိုင်တွယ်တာကို ကြည်.ပြီး သာယာနေမိတယ်ဗျာ။
ဒီလိုနဲ.ပဲ ရှိုးပွဲမပြီးခင် ကိုအောင်မြတ်က ပြန်ချင်တယ်ဆိုတော.မှ ကျတော်.မိန်းမကို ကျတော.ဆီပြန်ပို.ပြီး သူကတော. အေးအေးဆေးဆေးပြန်သွားတယ်ဗျာ။ ကျတော်နဲ. သက်မွန်တို.နှစ်ယောက်ကတော. ရင်ခုန်စရာအပြည်.နဲ. ကျန်နေခဲ.တာပေါ.။အဲ.ညက ကျတော်အတော်ကို ထန်နေတော. ဆေးကူပြီး သက်မွန်ကို တွယ်လိုက်တယ်ဗျာ စစချင်း စောက်ဖုတ်ကိုတစ်ချီ၊ နောက်လေးဖက်ကုန်းခိုင်းပြီး ဖင်ကိုလိုးတာတစ်ချီ၊ သူက အပေါ်ကနေတက်ဆောင်.တာတစ်ချီ နောက်ဆုံးပိတ်စားပွဲပေါ်လက်ထောက်ခိုင်းပြီး နောက်ကနေလုပ်ရင်းနဲ. ပြီးခါနီးမှ ဖင်ပေါက်ထဲ ပြောင်းထည်.ြ့ပီး တစ်ချီပြီးလိုက်တယ် လူလဲ မြော.သွားတာပဲ။ သက်မွန်ကတောင် အံ.သြနေတယ်။ ကို ဒီနေ.အတော်ကို အားတွေရှိနေတယ်ပေါ. ဟုတ်လားတဲ. ။
ကျတော်ကလဲ အင်းဟုတ်တယ် သက်မွန်ဆရာက လက်ယဉ်တယ်နော်ဆိုတော. အကို တွေ.တယ်ပေါ. သက်မွန်ကို ဆရာဘယ်လိုလုပ်နေလဲဆိုတာ။ အင်း ဟုတ်တယ်။ သက်မွန်ကလဲ ကိုတစ်ယောက်လုံးပါလာတာကို တောင် သတိမရတော.ဘူးမဟုတ်လား ဆိုတော. သက်မွန်က “မဟုတ်ရပါဘူးကိုရယ် သက်မွန်က ဆရာ.ကိုကြောက်ရတယ် ဆရာက အရမ်းစိတ်ကြီးတာ ဆရာခိုင်းတာ မလုပ်နိုင်ရင် ဆရာက စိတ်တိုတတ်တယ်။ ဆရာက မရိုင်းပေမယ်. သူ.စိတ်နဲ. မတွေ.ရင် သက်မွန်တို.ကို ငေါက်တတ်တယ်ကိုရဲ. အဲ.ဒါကြောင်.ပါ။ ဒါပေမယ်. ကိုက တွေ.တယ်လို.သာပြောတာ စိတ်ဆိုးပုံလဲ မရဘူး” “အင်း ဟုတ်တယ် သက်မွန် ကိုလဲ ဘာတွေဖြစ်နေလဲ မသိဘူး”
“ ဘာလဲ ဆရာက အဲ.လိုကိုင်တာတွေ.ပြီး သက်မွန်ကို ဒီနေ.ည စိတ်တွေအရမ်းပါလာတယ်ဆိုပါတော.” “ အင်း ဟုတ်တယ်သက်မွန် စိတ်တော.မဆိုးနဲ.ကွာ။ ဒီနေ.ည ကိုက သက်မွန်ကို တက်လုပ်နေပေမယ်. ကို.စိတ်ထဲမှာ ကိုအောင်မြတ်က သက်မွန်ကို တက်လုပ်နေတယ်လို. ခံစားရပြီး အရမ်းကိုကောင်းနေတာ” “ ဟယ် အဲ.လိုကြီးလား ကိုက” “ ဟုတ်တယ်သက်မွန်ရေ ယောက်ျားကို စိတ်မဆိုးနဲ.နော်” “ ဟုတ်ပါပြီ ကိုရယ် အပြင်မှာ တကယ်ဆိုလဲ သက်မွန်ကို ကိုက စိတ်ပြန်မဆိုးနဲ. ဒါပဲ” “ အပြင်မှာ….. ဟုတ်လားသက်မွန်” “ အင်းပေါ. ဆရာက သက်မွန်ကို အရမ်းဖေဘာပေးတာ အကိုရဲ. သက်မွန်ကိုလဲ ဆေးရုံမှာ ဟိုကိုင်ဒီကိုင်ကိုင်တတ်တယ်။ အဲ.အဆင်.ထက်တော. မပိုပါဘူး။
ဒါပေမယ်. သက်မွန်က အဲ.အဆင်.ထက်လဲ မကျော်ရဲဘူး” “ ဟာရတယ် သက်မွန် ကို.ကိုသာ ပွင်.ပွင်.လင်းလင်းပြော သက်မွန် ဘာဖြစ်ချင်တယ် ဘာလုပ်ချင်တယ် ပွင်.ပွင်.လင်းလင်းနဲ. ကို.ကိုသာပြောပြီးလုပ် ကိုအားလုံး ခွင်.ပြုတယ်” “တကယ်လားကိုရယ်” “ တကယ်ပေါ. သက်မွန်ရယ်” “ အင်း ပြောပြရအုံးမယ် ယောက်ျားကို ဆရာ.အကြောင်း” “အင်းပြောပြလေ သက်မွန်” “ ဆရာ.မှာ မိန်းမရှိတယ်ဆိုတာ အကိုသိတယ်နော်။ဆရာ.မိန်းမနံမည်က မဖြူဖြူဖွေးတဲ.။ သူ.မိန်းမက သက်မွန်တို.ဆေးကျောင်းကပဲ။ အတန်းတော.ကြီးတယ်။ ဒါပေမယ်. သက်မွန်တို.နဲ. အဆောင်တူတော. ညီအမတွေထက်တောင် ခင်သေးတယ်။ ကျောင်းတုန်းက ကဲဖော်ကဲဖက် သွေးသောက် ညီအမတွေပေါ.။ သူ.အကြောင်းကိုသိ ကို.အကြောင်းသူသိ။
သူယောက်ျားရသွားတော. ညီမက အကိုနဲ. လက်ထပ်ပြီးကာစ သိပ်မကွာဘူး။ အဲ.တုန်းက သူကရန်ကုန်မှာ မင်္ဂလာဆောင်တာဆိုတော. သက်မွန်တို. မသွားလိုက်ရဘူး။ သူတို. မင်္ဂလာဆောင်ပြီးတော.မှ သက်မွန်နဲ. ပြန်တွေ.တာ ဆရာနဲ.တော. အဲတုန်းက အတွေ.ခဲ.ရဘူး။ ဒါပေမယ်. ဆရာ.အကြောင်းတော. အတော်သိခဲ.ရတယ်။ ဖြူဖွေးက သက်မွန်ကို အကုန်ပြောပြတယ် ပြီးတော. သက်မွန်ကိုလဲမေးတယ် မတွေ.တာကြာတဲ. ညီအမနှစယောက်ပြန်တွေ.တော. တယောက်အကြောင်းတစ်ယောက်မေးကြ တွတ်ထိုးကြတာပေါ. အကိုရယ်။ အဲ.မှာ ဖြူဖွေးက သူ.ယောက်ျား အိပ်ယာပေါ်မှာ ဘယ်လောက်တောင် ကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တဲ.အကြောင်း သူ.ယောက်ျားပစ္စည်း ဘယ်လောက်ကြီးကြောင်းတွေ ကြွားတာပေါ.။ သူ.ယောက်ျားက သူ.ကိုယ်သူအတွက်တင်မဟုတ်ပဲ သူ.ကိုလဲ အလေးထား ဆက်ဆံတယ်တဲ.။
လိုးရင်လဲ ဖြူဖွေးကို အကြိမ်ကြိမ်ပြီးအောင်လိုးပေးပြီးမှ သူက ပြီးတာတဲ. အကိုရဲ.။ ပြီးတော. သူ.လီးကြီးက အတော်ကိုကြီးတာတဲ.။ ပြီးတော. ဖြူဖွေးက အပျိုမစစ်တာကို သူကသိတယ်တဲ. သူနားလည်ပေးနိုင်တယ်တဲ.။နောက်ကိုသာ သူမသိအောင်မလုပ်ဖို.နဲ. လုပ်ချင်စိတ်ပေါက်လာရင် သူ.ကို အသိပေးပြီး လုပ်ဖို. သေချာကို မှာထားတာတဲ.။ သူလဲပဲ တခြားတစ်ယောက်နဲ. ဖြစ်ရင်ပြောပြတယ်တဲ.။ ဒါပေမယ်. ဆရာက အဝေးမှာ နေရတော. ဖြူဖွေးက နားလည်ပေးနိုင်တယ် သူ.အတွက်တော. မလိုဘူးပေါ.။ ဒါပေမယ်. ဆရာက မိန်းမလဲ သွေးသားနဲ.ပဲ တောင်.တလာရင် အဆင်ပြေအောင် ဖြေရှင်းဖို. ယောက်ျားကို အားမနာဖို. ပြောပြထားတယ်တဲ.” “ဆရာနဲ.အကိုနဲ. တူတာရှိတယ်။
အဲ.တာက အပေါက်စုံအောင်ကိုလုပ်တာ။ အကိုလဲ သက်မွန်ကို အရှေ.အနောက်ပါးစပ် စုံအောင်လုပ်သလို ဆရာကလဲ ဖြူဖွေးကို အစုံလုပ်တယ်တဲ.။ ဖြူဖွေးကတော. ဆရာတပတ်တခါလာတာနဲ.တင်ကို အတော်ကောင်းဆိုပဲ တခါဆို ဆိုသလောက်ကောင်းအောင်ကို လိုးပေးသွားတာ။” “ ဟီး အားကျစရာကြီး။” “ ဟုတ်ပါပြီ မိန်းမရယ်၊ ကိုအောင်မြတ်ကြီးကလဲ ငါ.မိန်းမလေးကို လိုးချင်နေလို. နေမယ်ဖင်လေးကို လာလာကိုင်တာ။” “ကိုအောင်မြတ်နဲ.ဆို အကိုခွင်.ပြုပါတယ် သက်မွန်။ ဒါပေမယ်. ကို.ကိုတော. အကုန်ပြောပြရမယ်နော်။” “အင်းပါ ကိုရဲ. သေချာကို ပြောပြမယ်။” နောက်ရက်ကျတော. ကောင်းမြတ်က အလုပ်နဲ. ခရီးထွက်သွားတယ်။ သက်မွန်တစ်ယောက် ကောင်းမြတ်ဆီက ခွင်.ပြုချက်ရပြီဆိုတော. ရင်တွေခုန်နေမိတယ်။ ဒီနေ.ဆရာနဲ.တွေ.ရမှာတွေးပြီး ညီမလေးတောင် လှိုက်ပြီး ယားလာတယ်။
ဒီနေ. ခန္ဒာကိုယ်အလှကို ပိုပေါ်တဲ. မြန်မာဝတ်စုံ အကြပ်ကလေးကို ဝတ်ရင်း မှန်ထဲမှာ ကိုယ်.ကိုကို ပြန်ကြည်.မိတယ်။ ဒီပုံစံလေးနဲ.ဆို ဆရာတော. အရမ်းကြိုက်နေမှာပဲလို.။ဒီလိုနဲ. ဆေးရုံရောက်တော. ထုံးစံအတိုင်း အလုပ်တွေ အလွန်ရှုပ် တနေ.လည်လုံး မနားလိုက်ရဘူး။ ဆရာလဲ ဝတ်ထဲ ဟိုဒီပြေးနေရတယ်။ နေ.လည်စာစားပြီးတော.မှ အလုပ်လေးနဲနဲပါးပါး လုပ်နေတုန်း ဆရာရယ် နောက်ကနေရောက်လာပြီး သက်မွန်ဖင်လုံးလေးကို ကိုင်ပြီး “ နေ.လည်စာစားပြီး ပြီလား ”တဲ.။ သိပ်ဆိုးတဲ.ဆရာ။ “စားပြီးပြီဆရာ ” ဆိုတော. “ဆရာ. အခန်းကို ခနလောက်လိုက်ခဲ.ပါလား။” သက်မွန်လဲ “ဟုတ်ကဲ.ဆရာ ခနနေလိုက်လာခဲ.လိုက်ပါ.မယ်” လို. ပြန်ဖြေလိုက်တော. ဆရာက သက်မွန်ဖင်လုံးလေးကို ညှစ်ပြီး ပုတ်ပြီး “ ဒါဖြင်. ဆရာ အခန်းကစောင်.နေမယ် သိပ်မကြာစေနဲ. ” လို.ပြောပြီး ထွက်သွားတယ်။ သက်မွန်လဲ အလုပ်တွေကို မြန်မြန်ဖြတ်ပြီး တွိုင်းလက် ခနသွား သေသေချာချာ သန်.ရှင်းရေးလုပ်ပြီး ဆရာ.ဆီ ထွက်လာခဲ.လိုက်တယ်။
ဆရာ.အခန်းရှေ.ရောက်တော. တံခါးကိုခေါက်လိုက်ပြီး ဝင်ခဲ.ရမလားဆရာဆိုတော. ဆရာက ဝင်ခဲ.တဲ.။အခန်းထဲရောက်တော. ဆရာက တံခါး လော.ချထားလိုက် တခြားသူတွေ ဝင်လာလိမ်.မယ်တဲ.။ဒါနဲ လော.ချပြီး ဆရာ.နားကို သွားလိုက်တယ်။ အနားကိုရောက်တော. ဆရာက မတ်တပ်ရပ်လိုက်ပြီး သက်မွန်.အနားကို ကပ်လာပြီး ဂျူတီကုတ်လေးကို ဆွဲချွတ်လိုက်တယ်။ နင်.အလှက အဲ.ကုတ်အောက်မှာ ပျောက်နေတယ်။ အဲ.ဒါမပါမှ ပိုလှတာဆိုပြီး သက်မွန်ရဲ. ဖင်လုံးလေးတွေကို ကိုင်ညှစ်ပေးလိုက်တယ်။ သက်မွန်ရင်ဘတ်ထဲ အရမ်းကို ကျေနပ်သွားတယ်။ဒီလိုနဲ. ညနေရောက်တော. ဂျူတီကထွက်ရတော. ဆရာပေးလိုက်တဲ. ပစ္စည်းလေးတွေ သေချာသိမ်းယူပြီး အိမ်ကိုပြန်လာခဲ.လိုက်တယ်။ မနက်ဖြန် တနေ.လုံး ဂျူတီမရှိဘူး။ ညဂျူတီပဲ ဆင်းရမှာ။ အိမ်ပြန်ရောက်တော. ရေမိုးချိုး ပြီး ခနနားနေလိုက်တယ်။ ညကျ ဆရာက ညနေစာလိုက်ကျွေးချင်တယ်တဲ.။ မငြင်းရဲတော. လက်ခံလိုက်မိတယ်။ည၇နာရီလောက် လာခော်မယ်တဲ.။ဘာဝတ်သွားရင် ကောင်းမလဲလို. ကောင်းမြတ်ကို ဖုန်းဆက်မေးလိုက်တယ်။ “အကိုလား၊ သက်မွန်ပါ၊ အင်း ဆရာနဲ. ချိန်းထားလို.၊ ညစာသွားစားမလို.လေ၊ အဲ.ဒါ သက်မွန် ဘာဝတ်သွားရင်ကောင်းမလဲလို. လှမ်းမေးတာ ကိုကောအလုပ်က အဆင်ပြေရဲ.လား” “အဆင်ပြေပါတယ် မိန်းမရေ။
ဟင် တစ်ရက်ထဲနဲ.ကို ကိုအောင်မြတ်ကြီးက ဒိတ်တော.တာပဲ၊ မိန်းမကလဲ ဟန်ကို မဆောင်နိုင်ဘူး၊ တန်းလိုက်သွားတော.မယ်ပေါ.လေ၊ဟုတ်လား” “အင်းပေါ. ကိုရဲ.၊ ကိုကလဲခွင်.ပေးထားတာပဲကို၊ ကို ခွင်.မပြုရင် သက်မွန် မသွားတော.ပါဘူး၊ ဆရာ.ဆီ ဖုန်းပြန်ဆက်လိုက်မယ်၊ မသွားဖြစ်ဘူးလို.” “ဟာ သက်မွန်ကလဲ၊ ကိုက ခွင်.ပြုပါတယ်မိန်းမရဲ.၊ ကျေကျေနပ်နပ်ကြီးနဲ.ကို ခွင်.ပြုပါတယ်ကွာ၊ ကိုယ်.ကိုတော. အကုန်ပြန်ပြောပြရမယ်နော် ဟုတ်ပြီလား။” “အင်းပါ ကိုရဲ.၊ အကုန်ပြန်ပြောပြမှာပေါ.။ အခုတောင် ည ဘာဝတ်ရင်ကောင်းမလဲ လှမ်းမေးနေတာကို၊ မပြောချင်ရင် ဖုန်းတောင်ဆက်မနေဘူး၊ ဒီတိုင်းသွားလိုက်မှာပေါ.” “ဟုတ်ပါပြီဗျာ၊ ဒါနဲ. ဒီနေ.တနေ.လုံး ဆရာနဲ. ထူးခြားမှုတွေရှိသေးလား ။
ကို.ကိုပြောပြပါအုံး မိန်းမရေ။ ယောက်ျား ကြားချင်လှပြီ။” “အင်း ထူးခြားတာပေါ.။ မနက် အလုပ်တွေရှုပ်ပြီး နေ.လည် ခနနားတော. ဆရာရယ်လေ သက်မွန်နားရောက်လာပြီး သူ.အခန်းလာခဲ.ဖို.ပြောရင်း ဖင်တုံးလေးကို ညှစ်သွားတယ်၊ သိလားကို။ သက်မွန်ဖြင်. လူတွေမြင်ကုန်မှာ တွေးပြီး ကြက်သီးတွေတောင်ထလို.။ အဲ.ဒါနဲ. သက်မွန်လဲ တွိုင်းလက်သွားပြီး ဆေးကြောသန်.ရှင်းရေးလုပ်ပြီး ဆရာ.ဆီထွက်သွားလိုက်တယ် ကို” “ဘာလဲ ဆရာ.ဆီရောက်ရင် အကိုင်ခံရမှာ သိနေလို. သန်.ရှင်းရေးလုပ်သွားပေါ.၊ ဟုတ်လား သက်မွန်” “အင်းပေါ. ကိုရဲ.။ အခန်းထဲရောက်တော. ဆရာက လော.ချလိုက်တဲ.၊ သူများတွေ ဝင်လာလိမ်.မယ်တဲ.။ သက်မွန်လဲ လော.ချပြီး ဆရာ.နားသွားလိုက်တော. ဆရာက ထလာပြီး သက်မွန် ဂျူတီကုတ်ကို ချွတ်လိုက်တယ်။ အဲ.ဒါကြီးနဲ.ဆို လှဘူးတဲ.။
ဒီတိုင်းလေးကမှ လှတာလို. ပြောပြီး သက်မွန်နို.လေးတွေကို အကျီပေါ်ကနေ ညှစ်ပြီး ကိုင်တယ်။ပြီးတော. သက်မွန်ကို ဟိုဘက်လှည်.ပြီး စားပွဲပေါ်လက်ထောက်လိုက်ဆိုလို. သက်မွန်လဲ ဆရာခိုင်းတဲ. အတိုင်း စားပွဲပေါ်လက်ထောက်ပြီး ဖင်လေးကို နောက်ပစ်ထားလိုက်တယ်” “ဖင်လေးက အမိုက်စားလေးပဲ။ ငါ. မိန်းမဖင်ထက် နဲနဲ ပိုကြီးတယ်။ နင်.ဖင်လေးက ပိုလုံးပိုကောက်တယ် ငါ.မိန်းမထက်။ နင် ငါ.မိန်းမကိုသိတယ်မလား” “သိတာပေါ. ဆရာရဲ. သူ.အကြောင်း အကုန်သိ။ ဆရာ.မိန်းမနဲ. သက်မွန်နဲ.က တစ်ဆောင်ထဲတစ်ခန်းထဲ နေခဲ.ကြတာဆရာရဲ.” “အော် ကဲဖော်ကဲဖက်တွေပေါ.။ အင်း ငါ.မိန်းမလဲ ငါနဲ. မရခင်က အတော်ကဲတာ။ ငါနဲ.ရပြီးမှ ငါ.လက်ချက်မိပြီးမှ ငြိမ်သွားတာ။ ငါ.လက်ချက်မိပြီးသွားရင် တော်ရုံလူ မတိုးတော.ဘူး။
နင်လဲ ငါ.လက်စာမိပြီးသွားရင် ကောင်းမြတ်နဲ.ဆို အာသာပြေမှာတောင် မဟုတ်တော.ဘူးနော် သိလား” “ရပါတယ် ဆရာ။ အခုတောင် သမီးယောက်ျားနဲ.ဆို မဝတဝဖြစ်နေတာ၊ ဆရာ သမီး ကို သဘောကျရဲ.လားဟင် ” “ကျတာပေါ. ကျလို.လဲ နင်.ငါ ခေါ်တွေ.တာပေါ.”လို.ပြောပြီး သက်မွန်ဖင်ကို ဆရာ.လက်ဝါးကြီးနဲ. ဘယ်ကော ညာကော ခပ်ကြမ်းကြမ်း ရိုက်လိုက်တယ်။ သက်မွန်ဖြင်. နာလည်းနာ ကောင်းလဲကောင်းဖြစ်သွားတယ် အကိုရဲ.” “ပြီးတော.မှ သက်မွန်ကို ဆွဲထူပြီး ဆရာက နို.လေးကိုကိုင် ဖင်လေးကိုညှစ်ပြီး သက်မွန်နှတ်ခမ်းတွေနမ်းတယ် အကို။ သက်မွန်ဆို လေထဲမြောနေသလိုပဲ ဆရာ.အနမ်းမှာ၊ သက်မွန်လျှာလေးကို ဆရာက ဆွဲစုပ်လိုက်ရင် တကိုယ်လုံးက အားတွေအကုန် ဆရာ.ဆီ ပါသွားသလိုပဲ နုန်းချိသွားတယ်”
“ဆရာက သက်မွန်ကို ထိန်းထားရင်းနဲ. သက်မွန်ထမီကိုချွတ် အောက်ခံဘောင်းဘီထဲ လက်နှိက်ပြီး သက်မွန် ညီမလေးရဲ. အစိလေးကို ပွတ်ပေးတယ် အကိုရယ်၊ သက်မွန်ဘဝမှာ အဲ.လောက်မကောင်းခဲ.ဖူးဘူး။ အစိလေးကို ပွတ်ပြီး လက်ခလယ်လေးကိုထိုးထည်.ပြီး အသွင်းအထုတ်ကစားလိုက်တာနဲ.တင် သက်မွန် တစ်ခါပြီး သွားတယ် အကိုရေ။” “ကိုယ်.ယောက်ျားနဲ. လိုးရင်တောင် မပြီးတဲ. သက်မွန်လေ ဆရာနဲ.မှ လုပ်တောင် မလုပ်လိုက်ရဘူး လက်နဲ.တင်ကို တစ်ခါပြီး သွားရတယ်” “ဟီး ဟီး စိတ်မဆိုးနဲ.နော် ကို” “ဆိုးပါဘူးဗျာ ကို.မိန်းမလေး ကောင်းနေရင်ကို ကိုကကျေနပ်နေတာ” “ပြီးတော.ကော ဘာတွေဆက်ဖြစ်သေးလဲ” “ပြီးတော. ဆရာ.လီးကြီးကို ကိုင်ခိုင်းတယ် အကို”
“ဆရာ.ဟာကြီးက အကြီးကြီးပဲ၊ အကို.ဟာနဲ.ယှဉ်ကြည်.ရင် တခြားဆီပဲ” ကောင်းမြတ်တစ်ယောက် တဖက်မှ ဖုန်းပြောနေရင်း သူ.မိန်းမကို တခြားယောက်ျားတစ်ယောက်က ပယ်ပယ်နယ်အကိုင်ခံရတာ၊ ကိုယ်.မိန်းမက ကို.ကို အားမလိုအားမရဖြစ်ပြီး တခြားတယောက်ကို အားရကျေနပ်နေတာ၊ တခြားသူနဲ.ယှဉ်ပြီး မိမိပစ္စည်းကို သေးတယ်လို. အပြောခံရတာတွေကြောင်. ဖီးအကြီးအကျယ် တက်ပြီး လီးတောင်လာတယ်။ သူ.မိန်းမ ပြောတာနားထောင်ရင်းနဲ. ဂွင်းတိုက်ရတာကို ကြိုက်နေတယ်။ သက်မွန်ကလဲ ကောင်းမြတ် အကြိုက်ကို သိနေသလိုပဲ အသေးစိတ်ကို ပြောပြနေတယ်။ “ဆရာ.ဟာကြီးက ၇လက်မလောက်ရှိတယ် ဒစ်ကြီးကလဲ အကြီးကြီးပဲ အရင်းနားကျ နဲနဲသေးသွားတယ်။
အကို.ဟာက သက်မွန်လက်နဲ.တကိုင်စာပဲရှိတယ်။ ဆရာ.ဟာက သက်မွန်လက်နှစ်ဖက်နဲ.ကိုင်မှ ထိပ်ကိုဖုံးမိတာ။သက်မွန်လေ ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ မသိဘူး ဆရာ.လီးကို ကိုင်ကြည်.မိတာနဲ.တင် ပါးစပ်ထဲမှာ ဘယ်လိုဖြစ်နေမှန်းကိုမသိဘူး အရမ်းကိုစုပ်ချင်လာတယ် အကိုရဲ.။ ဆရာကလဲ သိနေတယ်။ သက်မွန်အရမ်းစုပ်ချင်နေမှန်းကို။ အဲ.ဒါ ဆရာက သက်မွန်သဘောဆိုပြီးပြောတော. အကိုရယ် သက်မွန်ရယ်လေ ဆရာ.လီးထိပ်ကြီးကို အားရပါးရငုံပြီးတော.ကို စုပ်ပေးမိတာပဲ” ကောင်းမြတ်မှာတော. သက်မွန် ကိုအောင်မြတ်လီးကို စုပ်နေပုံကို မျက်စိထဲမြင်ရောင်ပြီး ဖီးလ်အရမ်းတက်ပြီး ဂွင်းထုနေမိတယ်။ကိုအောင်မြတ်ရှေ.မှာဒူးထောက်ပြီး သူ.မိန်းမကလီးစုပ်ပေးနေတာကို သူကိုယ်တိုင်ဘေးကနေထိုင်ကြည်.ချင်စိတ်တွေဖြစ်နေမိတယ်။
အခုလဲ သက်မွန်ပြောတာကို ဆက်နားထောင်နေလိုက်တယ်။သက်မွန်က “ အကိုရယ်၊ ဆရာ.လီးထိပ်ကြီးကလေ အရမ်းကြီးတော. ပါးစပ်ထဲမှာကို ပြည်.နေတာပဲ။ သက်မွန်လေ အဲ.လောက်ကြီးတာကြီး မစုပ်ပေးဖူးဘူး သိလား အကို။ အကိုခွင်.လွှတ်နော်။” “ရပါတယ် မိန်းမရယ်။ မိန်းမကျေနပ်တယ်မို.လား။ မိန်းမကျေနပ်တယ်ဆိုရင် ယောက်ျားလဲ ကျေနပ်တယ် ပြောထားတာပဲကို။ ဟုတ်ပြီလား မိန်းမ” “အင်းပါ ကိုရဲ.။ ယောက်ျားကို ကြိုတောင်းပန်ထားတာပါ။သက်မွန်လဲ ဆရာ.လီးကိုစုပ်နေရင်းဆရာ.ကို လှမ်းကြည်.တော. ဆရာက သက်မွန်ကို သေချာစိုက်ကြည်.နေတယ် ကိုရယ်။
သက်မွန်လဲ ဆရာကျေနပ်အောင် အသေအချာကို စုပ်ပေးလိုက်တယ်။ ပြီးတော.လက်တဖက်က ဆရာ.ဥလေး နှစ်လုံးကို ဖွဖွလေးကိုင်ပြီး ပွတ်ပေးလိုက်တယ် အကို။ ဆရာ.မျက်နှာမှာ အရမ်းကျေနပ်တဲ.ပုံလေးဖြစ်သွားတယ် အကိုရဲ.။ အဲ.ဒါနဲ. သက်မွန်လဲ ဆရာ.လီးကိုပါးစပ်ကနေထုတ်ပြီး ဆရာ. ဥလေးကို တလုံးချင်းစုပ်ပေးလိုက်တာပေါ.။ လက်ကလဲ ဆရာ.လီးကြီးကို ဂွင်းတိုက်ပေးသလို ပွတ်ပေးလိုက်တယ်။” “ဆရာက သက်မွန်စုပ်ပေးတာ အရမ်းကောင်းတယ်ဆိုပြီးပြောတော. သက်မွန်လီးစုပ်ပေးရတာ အရမ်းအားရှိသွားတာပေါ.။
ဆရာ.လီးထိပ်ကြီးကိုစုပ်လိုက် ဥလေးတွေစုပ်လိုက်နဲ. လုပ်ပေးနေတယ်။ ဆရာက တော်တော်ကြာတော. သက်မွန်ခေါင်းကို လက်နှစ်ဖက်နဲ.ကိုင်ပြီး သက်မွန်ပါးစပ်ထဲ ဆရာ.လီးကြီးကို ထုတ်လိုက်သွင်းလိုက်နဲ. လုပ်ပေးနေတယ်။ သက်မွန်လဲ အသက်ကို ခိုးခိုးရှုပြီး ဆရာ.လီးကို စုပ်ပေးလိုက်တယ် အကို။ ခနလောက်နေတော. ဆရာ.လီးထိပ်ကနေ လရည်တွေပန်းထွက်ကုန်တော.တာပဲ အကိုရယ်။ အရည်တွေဆိုရင်လေ အများကြီးပဲ သက်မွန်ဖြင်. မျိုချလို.ကို မနိုင်ဘူး ပါးစောင်ကနေကို လျှံထွက်ကုန်လို. လက်နဲ.ခံထားရတယ်။” “ ဆရာဆိုရင်လေ သက်မွန်ခေါင်းကိုကိုင်ပြီး ဆောင်.ဆောင်.ထည်.တာ သက်မွန်ဖြင်. အရမ်းကိုကောင်းသွားတာပဲကိုရယ်။ လီးစုပ်ပေးရင်း ပါးစပ်ကို အလုပ်ခံရင်းနဲ. တခါထပ်ပြီး ပြီးသွားတယ်။ ဆရာ.လရည်တွေကုန်သွားမှ သက်မွန်လဲ ဆရာ.လီးကိုပြောင်နေအောင် လျှာလေးနဲ.လိုက်ယက်ပေးလိုက်တယ် အကို။
ပြီးတော.မှ လက်ဖဝါးထဲက ဆရာ.လရည်တွေကို ဆရာမြင်အောင်ပြပြီး လျှာနဲ.လျက်ပြီး သောက်လိုက်တယ်။ ဆရာက ခနနေအုံး ပါးစပ်ဟဆိုလို. ဟပေးလိုက်တော. ဆရာက သက်မွန်ပါးစပ်ထဲကို တံတွေးတွေ ထွေးထည်.လိုက်တယ်။ သက်မွန်လီးစုပ်တာတော်လို.ဆုချတာတဲ. အကို။ သက်မွန်ဆို အရမ်းကိုပျော်သွားတာပေါ.။ သက်မွန်ပါးစပ်ထဲက လရည်တွေ တံတွေးတွေကို သေချာကို အရသာခံပြီးမှ မျိုချလိုက်တယ် အရမ်းအရသာရှိတာပဲ အကိုရယ်။” အဲ.အချိန် ကောင်းမြတ်မှာ သူ.မိန်းမပြောတာကိုနားထောင်ရင်းနဲ. တချီပြီးသွားပါတော.တယ်။နားထောင်ရတာကို ဒီလောက်ဖီးလ်တက်နေရင် သေချာသာထိုင်ကြည်.လိုက်ရလို.ကတော. ဘယ်လိုဖြစ်နေမလဲဆိုပြီး စဉ်းစားနေမိတယ်။
အဲ.အချိန် သူ.မိန်းမသက်မွန်က “ ဆရာ.လီးကိုစုပ်ပေးပြီးသွားတော. ဆရာကလဲ အဝတ်တွေပြန်ဝတ်၊ သက်မွန်လဲ အဝတ်အစားလေးတွေကိုဆွဲဆန်. သပ်သပ်ရပ်ရပ်ဖြစ်အောင် ပြန်လုပ်ပြီး ပါးစပ်ရေဆေးမလို.လုပ်တော. ဆရာက ပါးလုပ်မကျင်းရဘူးတဲ. အကိုရယ် ဒီတိုင်းနေတဲ.။ အရသာပျက်သွားလိမ်.မယ်တဲ. ဒီတိုင်းပဲနေလိုက်ပါလို.ပြောတယ် ကို။” အဲ.ဒါနဲ. သက်မွန်လဲ ဒီတိုင်း ပဲနေလိုက်တယ်။ “ ဆရာကိုအောင်မြတ်က သက်မွန်ကို အထုပ်တထုပ်ပေးလိုက်သေးတယ် အကို။ သက်မွန်လဲ ဖွင်.မကြည်.ရသေးဘူး။ အခုကြည်.လိုက်ရမလား။” “အင်း ကြည်.ကြည်.လိုက်လေ။ ကိုအောင်မြတ်က ဘာတွေပေးလိုက်လဲလို.၊” “အင်း သွားယူလိုက်အုံးမယ် အကိုခနစောင်.နော်။” “ဟုတ်ပါပြီမိန်းမရယ်၊ စောင်.ပါ.မယ်” ခနလောက်ကြာတော.မှ သက်မွန်ဆီက အံ.သြသံလေးကြားလိုက်ရတယ်။
“ဆရာကတော.လေ နိုင်ကိုမနိုင်ဘူးသိလား။” “ဟင် ဘာလို.လဲ မိန်းမ” “ ဆရာက သက်မွန်ကို လီးတုကြီး ထည်.ပေးလိုက်တယ် အကိုရဲ.။ဆရာ.ဟာကြီးလောက်ရှိတယ် ညိုညိုတုတ်တုတ်ကြီး။ ပြီးတော. အလုံးတွဲလေးတွေအများကြီးနဲ. နောက်ဆုံးမှာ လက်ကိုင်ကွင်းလေးလဲပါတယ် အဲ.ဒါက တစ်ခု၊ နောက်တခုကကျတော. ကီဂယ် လေ.ကျင်.ခန်းလုပ်တဲ. အလုံးလေးနှစ်လုံးပါတဲ. အတွဲလေးတစ်တွဲ။ နောက်တခုက စတီးနဲ.လုပ်ထားတဲ. ဖင်ထဲထည်.တဲ. ဟာလေး အကို.လီးလောက်တော.တုတ်တယ် အဲ.ဒါလေးရယ် ချောဆီဘူးလေးတစ်ဘူးရယ်ပါတယ် အကို” “အင်း သက်မွန်ကို လိုးတော.မလို.နဲ.တူတယ်နော် ကိုအောင်မြတ်က အဲ.ဒါတွေထည်.ပေးလိုက်တာ” “အင်း ဟုတ်လောက်တယ် အကို၊ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ အကို။ သက်မွန် ဆရာကတောင်းခဲ.ရင် ပေးလိုက်ရမလား၊” “မိန်းမသဘောပါပဲဗျာ။ မိန်းမစိတ်ကြိုက်ပါပဲ။ တခုတော.လုပ်ပေး။
မိန်းမတို.အတူနေဖြစ်ရင် ယောက်ျားဆီ ဖုန်းဆက်ပေး။ အဲ.ဒါလေးတော. ဟုတ်ပြီလား မိန်းမ” “ဟုတ်ပါပြီ ကိုရယ်။ ဆရာကသက်မွန်ကို လုပ်နေတဲ.အချိန် အကိုက ဘေးမှာရှိရင် ပိုကောင်းမယ်နော် အကို။” ဘယ်သွားကြမှာလဲ သက်မွန်တို.က” “မသိသေးဘူး ကိုရဲ.၊ ဆရာလာခေါ်မှသိမှာ” “အဲ.ဒါဆို စကပ်အကြပ်အမဲလေးနဲ. ပင်တီအရာ ထင်းနေအောင်ပေါ်တဲ. အတွင်းခံလေးနဲ.ဝတ်၊ အပေါ်ကျတော. ဘလောက်ပွပွ ပန်းရောင်နုနုလေးလေ ကိုဝယ်ပေးထားတဲ.ဟာလေးကို ဘရာမပါပဲ ဝတ်သွားလိုက်” “ဖိနပ်ကိုတော. ဟိုတခေါက်က သက်မွန်ဝယ်လာတဲ. ဒေါက်မြင်. အမဲလေး အဲ.တာလေးစီးသွားလိုက်၊ အားလုံးဝတ်ပြီးသွားရင် ပုံရိုက်ပြီး ပို.ပေးလိုက်အုံး ကိုလဲ ကြည်.ရအောင်” “ဟုတ်ပါပြီ ကိုရယ်။ ပို.ပေးလိုက်ပါ.မယ်။
ဒီနေ.ည ဘယ်သွားတယ် ဘာလုပ်တယ်ဆိုတာကို ဆရာ.ကို ရိုက်ခိုင်းပြီး ပို.ပေးလိုက်မယ် နော် အကို။”“ဟုတ်ပါပြီ မိန်းမရယ်။ ကိုအောင်မြတ်ကိုပဲ ရိုက်ပြီး ပို.ခိုင်းလိုက်ပါ။ အကိုကတော. ကိုအောင်မြတ်ကြီး ငါ.မိန်းမလေးကို ဘယ်လိုတွေများလုပ်နေမလဲလို. တွေးတွေးပြီး ဒီည အိပ်ပျော်တော.မယ် မထင်ဘူး။” “ဟာ အကိုကလဲ အိပ်ပျော်အောင်တော.အိပ်လိုက်ပါ နောက်နေ.ကျ သက်မွန်ဆီ ဖုန်းဆက်ပေါ. သက်မွန်အကုန်ပြောပြမှာပေါ. ဆရာနဲ. ဘယ်သွားတယ် ဘာလုပ်တယ်ဆိုတာ။ နော် လို.” “ဟုတ်ပါပြီ မိန်းမရေ။ ဟုတ်ပါပြီ။
အာ.ဆို ဖုန်းချလိုက်တော.မယ်နော်။ ကို ခုနက ပြောသလိုလေး ဝတ်စားပြီး သွားနော်။ ကိုအောင်မြတ်ကိုလဲ အကိုက အားမနာပါနဲ. စိတ်ကြိုက် သုံးဆောင်ပါလို. ပြောလိုက်တယ်ဆိုတာလေးပါ ပြောပေးအုံးနော် မိန်းမ။” “ဟုတ်ပါပြီတဲ.ရှင်၊ ဒါပဲနော် ယောက်ျား” ကောင်းမြတ်လဲ သက်မွန်နဲ. ဖုန်းပြောအပြီး သူ.မိန်းမကို ကိုအောင်မြတ်ကြီးက ဘယ်လိုများ လုပ်လိုက်လေမလဲ တွေးရင်း နောက်နေ.ကိုသာ မြန်မြန်ရောက်ချင်နေမိတော.တယ်။ အလုပ်ထဲမှာ လုပ်နေရတာလဲ စိတ်ထဲ ဘာလိုနေမှန်းမသိ စိတ်ရှုပ်နေပြီး အလုပ်မြန်မြန်သိမ်းကာ အဆောင်ကို ပြန်လာလိုက်တော.တယ်။ သက်မွန်ကတော. ကောင်းမြတ်ပြောတဲ.အတိုင်း စကပ်အကြပ်မဲမဲလေးနဲ. ပန်းရောင်နုနုဘလောက်လေးကို ဝတ်ပြီး ဆရာ.လာအခေါ်ကို စောင်.နေလိုက်တယ်။
သိပ်မကြာပါဘူး ဆရာ.ကားလေး ခြံထဲ မောင်းဝင်လာတာတွေ.လိုက်ရတယ်။ သက်မွန်လဲ အိမ်ပေါ်ကနေ အပြေးလေး ဆင်းလာပြီး ကိုအောင်မြတ်ကို ထွက်ကြိုတာပေါ.။ “ အမလေး ဖြေးဖြေးလာလဲ ရပါတယ် သက်ရယ်။ အကိုက ဘယ်မှ ထွက်မပြေးပါဘူး။ အကုန်လုံးလဲ ပြုတ်ပျက်ထွက်ပါအုံးမယ်။” “ဆရာ.ကိုမျှော်နေတာ သက်မွန်က။ ဆရာ.ကားလေးဝင်လာတာတွေ.တော. ဝမ်းသာအားရနဲ. ပြေးဆင်းလာတာပါ ဆရာ။ သက်မွန် ဝတ်ထားတာ လှရဲ.လား ဆရာ။ အဲ.တာ သက်မွန်ယောက်ျားကိုတိုင် ဝတ်ခိုင်းထားတာ ဆရာရဲ.။” “ဟာ ကောင်းမြတ်ကိုတိုင် ဝတ်ခိုင်းထားတာဆိုရင် အရမ်းလှတာပေါ.။ ဒီည ကိုနဲ. သွားမယ်ဆိုတာရော ပြောပြလိုက်သေးလား။” “ဟုတ်ကဲ. ဆရာ။ ပြောပြလိုက်တယ် သူ.ကို။ သူက ဆရာ.ကို မှာလိုက်သေးတယ်။ သူပေးလိုက်တာကို ဆရာက စိတ်ကြိုက်သုံးဆောင်ပါတဲ.၊ သူကျေနပ်ပါတယ်တဲ. ဆရာရေ။
သက်မွန်ကတော. သူကျေနပ်နပ်မနပ်နပ် ဆရာကျေနပ်ရင်ကို သက်မွန်က သဘောကျနေတာပါဆရာ။” “ဟုတ်ပါပြီ သက်မွန်ရယ်” ကိုအောင်မြတ်လဲ အိမ်ထဲ ဝင်ပြီး အိမ်တခါးကို အသာပိတ်လိုက်ကာ သက်မွန်ကို နှတ်ခမ်းချင်း တေ.နမ်းလိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော. သက်မွန်ရင်သားလေးတွေကိုလဲ အကျီပော်ကနေ အသာ ပွတ်သတ်ပေးပြီး လက်တဖက်က သက်မွန် ဖင်ကို အားရပါးရ ညှစ်ပေးလိုက်တော. သက်မွန်တယောက် ခါးလေးကိုကော.တက်ပြီး ကိုအောင်မြတ် လည်ပင်းကို သိုင်းဖက်ကာ ကိုအောင်မြတ်ရဲ. လျှာလေးကို အားရပါးရ စွဲစုပ်နေမိတယ်။ကိုအောင်မြတ်က စကပ်လေးကို အသာချွတ်လိုက်ပြီး အတွင်းခံထဲလက်ထည်.ကာ သက်မွန် ဖင်အဝလေးကို လက်ညှိုးလေးနဲ.ထိုးကလိနေလိုက်တယ်။ သက်မွန်လဲ ဖင်အဝကို ကလိခံရတော. ရင်ဘတ်ထဲ လှိုက်လှိုက်တက်လာတယ်။ ကိုအောင်မြတ်ကိုလဲ ပိုပြီး ဖက်ထားမိတယ်။ခနလောက်နေတော.မှ ကိုအောင်မြတ်က အနမ်းခြွေနေရာကနေ ခွာပြီး သက်မွန်ကို သူပေးထားတဲ. ပစ္စည်းလေးတွေကို သွားယူခိုင်းလိုက်တယ်။
သက်မွန်က ကိုအောင်မြတ်လက်ကို ဆွဲပြီး “ဆရာပါလိုက်ခဲ.” ဆိုပြီး ကိုအောင်မြတ်ကိုပါ သူတို.လင်မယားအိပ်ခန်းကို ခေါ်သွားတယ်။ သက်မွန်ရဲ. စကပ်မပါတော.တဲ. ဖင်လေးကို ကြည်.ရင်း ကိုအောင်မြတ်လဲ သက်မွန်ခေါ်ရာလိုက်သွားတာပေါ.။ အိပ်ခန်းထဲရောက်တော. ကိုအောင်မြတ်က သက်မွန်ကို အသာဆွဲလှည်.ပြီး ပခုံးကို အသာဖိချပြီး သူ.ရှေ.မှာ ဒူးထောက်ထိုင်ခိုင်းလိုက်တယ်။ သက်မွန်ကလည်း ကိုအောင်မြတ်ကို မျက်စောင်းလေးတချက်ထိုးကြည်.ပြီး ကိုအောင်မြတ်ရဲ. ဘောင်းဘီဇစ်ကို ဖြုတ်လိုက်ပြီး သိပ်မတောင်သေးတဲ. လီးကိုထုတ်ပြီး အားရပါးရ စုပ်ပေးလိုက်တယ်။ “ကောင်းလိုက်တာ သက်မွန်ရယ်။ သက်မွန်တို.လင်မယား အိပ်ခန်းထဲမှာ သက်မွန်ကို လီးစုပ်ခိုင်းရတာ ရှယ်ပဲသက်ရယ်။” သက်မွန်လဲ ကိုအောင်မြတ်လီးစုပ်နေရင်းနဲ. သူ.ယောက်ျားမှာတာသတိရသွားတယ်။ ပါးစပ်ထဲကလီးကို ထုတ်ပြီး ကိုအောင်မြတ်ကို ပြောလိုက်တယ်။
“ ကောင်းမြတ်ကို ပြဖို. သက် အကို.လီးစုပ်နေတာကို ဗီဒီယိုဖြစ်ဖြစ် ဓါတ်ပုံဖြစ်ဖြစ် ရိုက်ပေးပါလား အကို” “ဟာ ဟုတ်တာပေါ. အဲ.ကောင်ကို ပြရမယ်။ အဲ.ကောင် သူတို.အိပ်ခန်းထဲမှာ သူ.မိန်းမ ဘယ်လောက်တောင် ရွထပြီး ငါ.လီးကို အငမ်းမရစုပ်နေလဲဆိုတာ ပြရမယ်။ သက်ကလဲ ကို.လီးကို စိတ်ကြိုက် စုပ်နေ ကြားလား ” ဆိုပြီး ကိုအောင်မြတ်က သက်မွန်ပါးလေးကို ခပ်စပ်စပ် ရိုက်လိုက်ပြီး ပြောလိုက်တယ်။ ပြီးတော. ဖုန်းထုတ်ပြီး ကင်မရာဖွင်.ကာ ဗီဒီယို ရိုက်နေလိုက်တယ်။ သက်မွန်လဲ သူ.ယောက်ျားကို ပြဖို. ကင်မရာနဲ. ရိုက်နေတာကို သိတော. ခုနကလီးစုပ်တာထက်ပိုပြီး ရမက်ပြင်းပြင်းနဲ. ကိုအောင်မြတ်လီးကို စုပ်ပါတော.တယ်။ လီးကို စုပ်နေရင်းနဲ. ဘောလေးတွေပါ တစ်လုံးချင်း ငုံငုံပြီး အားရပါးရစုပ်ပေးတော. ကိုအောင်မြတ်တောင် ကောင်းလွန်းလို. ညည်းသံတွေပါ ထွက်လာတယ်။ “ အားပါး စုပ်စမ်း သက်မွန် စုပ်စမ်း။ နင်.လင်လီးကို စုပ်ရတာနဲ. ငါ.လီး စုပ်ရတာ ဘယ်လီးကစုပ်လို.ပိုကောင်းလဲ ပြောစမ်း ကောင်မ။ အားပါး စုပ်စမ်း ငါ.ဘောတွေပါ စုပ်စမ်း။ ကောင်းလိုက်တာကွာ နင်.ပါးစပ်ကို ငါပိုင်သွားပြီ နောက်နောင် နင်.လင်လီးကို စုပ်ချင်ရင်တောင် ငါ.ဆီက ခွင်.တောင်းရမယ် ကြားလားကောင်မ” လို.ပြောပြောပြီး သက်မွန်ဆံပင်တွေကို စုဆွဲပြီး ခါးကိုကော.ကာ ပါးစပ်ထဲ လီးထိုးထည်.ကာ လိုးပါတော.တယ်။
“ အကို.လီးက စုပ်လို.ပိုကောင်းတယ် အကို။ ဟိုကောင် ကောင်းမြတ်လီးက အကို.လီးတဝက်တောင် ရှိတာမဟုတ်ဘူး ဒါကြီးကမှ စုပ်ရတာ အားရတာ။ အားပါး ကောင်းလိုက်တာ အကိုရယ်။ အကို.ဘောတွေက နွေးနွေးလေး စုပ်လို. ကောင်းလိုက်တာ။ ဟုတ်ကဲ. ခွင်.တောင်းပါ.မယ် အကို။ ကြားလား ကောင်းမြတ် နောက် လီးစုပ်ခံချင်ရင် အကိုဆရာ ကိုအောင်မြတ်ဆီ ခွင်.တောင်းပြီး မှ သက်မွန်ကို လီးစုပ်ခိုင်းနော် သက်မွန်ကတော. အကိုအောင်မြတ်က ခွင်.မပြုရင် ရှင်.လီးကို ယောင်လို.တောင် လက်နဲ.မထိဘူးကြားတယ်နော်” ဆိုပြီး ကင်မရာကို ကြည်.ကာပြောရင်း လီးဆက်စုပ်ပါတော.တယ်။ အဲ.နောက် ကိုအောင်မြတ်က ပါးစပ်ကို လိုးတော. စကားပြောလို.မရတော.ဘဲ လည်ချောင်းထဲထိ လီးကိုရောက်အောင် အသာဟကာ ပါးစပ်လိုးတာကို အားရပါးရ ခံနေပါတော.တယ်။ ပြီးပါပြီ။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged အကိုထကျကောငျးတဲ့သူ